Ch 11 Ọrụ – 2azụ
Home / Bible / Ọrụ nke Ndịozi / Ch 11 Ọrụ
Ọrụ nke Ndịozi 11
11:1 Ma ndịozi na ụmụnna nọ na Judia nụrụ na ndị Jentaịl na-natara Okwu Chineke.
11:2 Mgbe ahụ, mgbe Peter agbagowo Jerusalem, ndị bụ ndị nke ibi úgwù rụrụ ụka megide ya,
11:3 si, "Gịnị mere unu na-abanye ka ebighị úgwù, gịnịkwa mere na ị na-eri na ha?"
11:4 Pita malitere ịgwa ha na ha, na-eme ihe n'usoro n'ụzọ, si:
11:5 "M bụ na Jọpa na-ekpe ekpere, na m hụrụ, na-awagharị nke uche, a ọhụụ: a na-akpa nēfedakwasi, dị ka a nnukwu ibé ákwà linin a ka si n'eluigwe site na ya na nkuku anọ. Na na ọ na-eru nso ka m.
11:6 Na-ele anya ya, M na-ewere na hụrụ anọ footed anụ ọhịa nke ụwa, na anụ ọhịa, na-akpụ akpụ, na-efe efe ihe nke elu-igwe.
11:7 Mgbe ahụ, m nụrụ otu olu na-asị m: 'Bilienụ, Peter. Gbuo, rie. '
11:8 Ma m sịrị: 'Ọ dịghị mgbe, onyenwe! N'ihi na olee ihe bụ ọsọ ma ọ bụ na-adịghị ọcha mgbe banye n'ọnụ m. '
11:9 Mgbe olu zara a ugboro abụọ si n'eluigwe, 'Ihe Chineke ọcha, i gaghi-akpọ nkịtị. '
11:10 Ugbu a nke a mere ugboro atọ. Na mgbe ahụ ihe niile e weere ọzọ n'ime heaven.
11:11 Ma, le, ozugbo e nwere ndị ikom atọ guzo n'akụkụ ụlọ ebe m nọ, ọ na e zitere m si na Sesaria.
11:12 Mmụọ gwara m na m ga-aga na ha, n'enweghị obi abụọ ọ bụla. Na ụmụnna isii ndị a so m gaa na-. Na anyị wee banye n'ime ụlọ nwoke ahụ.
11:13 Ọ kọwakwara ihe anyị otú ahụ ọ hụrụ ihe Angel n'ụlọ ya, guzo na-asị ya: 'Send ka Joppa kpọọ Simon, onye na-akpọkwa Pita.
11:14 Ma ọ ga-agwa gị okwu okwu, nke i ga-azọpụta gị dum na ụlọ ahụ. '
11:15 Ma mgbe m malitere ikwu okwu, Mmụọ Nsọ dakwasiri ha, dị nnọọ ka anyị na-, na mmalite.
11:16 Mgbe ahụ, m na-echeta okwu nke Onye-nwe, dị nnọọ ka ya onwe ya kwuru: 'John, n'ezie, ji mmiri mee baptizim, ma ị ga-baptizim na Mmụọ Nsọ. '
11:17 Ya mere, ma ọ bụrụ na Chineke nyere ha otu amara, ka nwekwara anyị, onye kwere na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ònye ka m bụ, na m ga-enwe ike gbochie Chineke?"
11:18 Mgbe ọ nụrụ ihe ndị a, ha bụ ndị nkịtị. Na ha nye Chineke otuto, si: "Ya mere, Chineke na-nyere ndị Jentaịl chegharịa si ndụ."
11:19 Na ụfọdụ n'ime ha, ebe e chụgara site mkpagbu mere n'okpuru Stephen, gara gburugburu, ọbụna na-Finishia na Saịprọs na Antiọk, na-ekwu okwu Okwu onye ọ bụla, ma e wezụga naanị ndị Juu.
11:20 Ma ụfọdụ n'ime ndị ikom ndị a si Saịprọs na Saịrini, mgbe ha banyere n'ime Antioch, okwu na-ekwu nwekwara ndị Gris, ezikwa Onyenwe anyị Jizọs.
11:21 Na aka Jehova we nọyere ha. Ọnụ ọgụgụ dịkwa ukwuu kweere na a tọghatara Jehova.
11:22 Ugbu a na ozi ọma bịara nti nke ndi Church na Jerusalem banyere ihe ndị a, ha zigara Banabas ka ọ gaa Antiọk.
11:23 Na mgbe ọ gara ebe ahụ na hụrụ amara nke Chineke, ọ gladdened. Ọ gbara ha ume niile nọgide n'ime Onyenwe anyị na a mkpebi obi.
11:24 N'ihi na ọ bụ ezi mmadụ, o we juputa na Mọ Nsọ na okwukwe. Na oké ìgwè mmadụ nọ na-agbakwunyere Jehova.
11:25 Mgbe ahụ Barnabas setịpụrụ maka Tasọs, ka o we achọ Saul. Ọ we chọta ya, enye ada enye edi Antioch.
11:26 Na ha na-akparịta n'ebe ahụ Church otu afọ zuru ezu. Ha kụziiri ndị dị otú a oké ìgwè, na ọ bu n'oge Antioch na-eso ụzọ Jizọs mbụ mara site na aha Christian.
11:27 Ma n'ụbọchị ndị a, amụma Jerusalem wee gakwuru Antioch.
11:28 Na otu n'ime ha, aha ya bụ Agabọs, ebili, na-egosi site na Mọ Nsọ na e-aga na-a oké ụnwụ n'elu ụwa nile, nke mere n'okpuru Claudius.
11:29 Mgbe ahụ na-eso ụzọ kwuru,, dị ka ihe onye ọ bụla nwere, ihe ha ga-enye ndị e zigara ụmụnna bi na Judia.
11:30 Na ha mere ihe, eziga ya ndị okenye site n'aka Banabas na Sọl.
Ọrụ nke Ndịozi 12
12:1 Ugbu a n'otu oge, eze Herod akp aka ya, iji emekpa ụfọdụ si Church.
12:2 Mgbe o gburu James, nwanne Jọn, na mma-agha.
12:3 Na ịhụ na ọ dị mma n'anya ndị Juu, ọ malitere ọzọ ijide Pita. Ugbu a ọ bụ ụbọchị nke ekoghị eko achịcha.
12:4 Mere, mgbe ọ na-achọ ijide ya, o we ziga ya n'ulo-nkpọrọ, inye ya n'ime mkpọrọ nke anọ dị iche iche nke agha anọ, mbiba na-emepụta ya na ndị mmadụ nke ngabiga.
12:5 Ya mere Pita ejide n'ụlọ mkpọrọ. Ma na-ekpe ekpere a na-mere na-ewepughi, site Church, Chineke n'ihu ya.
12:6 Na mgbe Herod dị njikere iji na-emepụta ya, na n'otu abalị, Pita nọ na-ehi ụra n'agbata ndị agha abụọ, na e kee abụọ n'agbụ. Ma e nwere ndị nche na n'ihu ọnụ ụzọ, ekpemede mkpọrọ.
12:7 Ma, le, ihe Angel nke Onyenwe anyị guzoro nso, na a ìhè shined pụta na cell. Na ịme ọpịpị Peter n'akụkụ, ọ kpọtee ya, si, "Bilie, ngwa ngwa. "Ma na nkpọrọ we si ya aka.
12:8 Mgbe mmụọ ozi ahụ sịrị ya: "Ejiji onwe gị, na-etinye na gị akpụkpọ ụkwụ. "O mere otú. O wee sị ya, "Kechie uwe gị gburugburu onwe gị na-eso m."
12:9 Na-aga, o soro ya. Na ọ na-amaghị nke a bụ eziokwu: na nke a na-eme site na ihe Angel. N'ihi na ọ chere na ọ nọ na-ahụ ọhụụ.
12:10 Na-agafe mbụ na nke abụọ nche, ha wee ígwè ụzọ ámá nke na-eduga n'ime obodo; na ya emeghe ha site n'onwe ya. na-apụ apụ, ha wee na-tinyere a ụfọdụ n'akụkụ n'okporo ámá. Na mberede, Angel hapụ ya.
12:11 Na Pita, alaghachi onwe ya, kwuru: "Ugbu a, m maara, n'ezie, na Jehova zitere mmụọ ozi ya, na na ọ napụtara m n'aka Herod na n'ebe nile na ndị Juu na-atụ anya. "
12:12 Ma mgbe ọ na-ewere nke a, ọ bịarutere n'ụlọ Mary, nne John, bụ onye a kpọkwara Mark, ebe ọtụtụ zukọrọ na-ekpe ekpere.
12:13 Mgbe ahụ, dị ka ọ kụrụ aka n'ọnụ ụzọ nke ọnụ ụzọ ámá, a girl wee si zaa, aha-ya bu Rhoda.
12:14 Na mgbe ọ matara olu Pita, nke ọṅụ, ọ na-emeghe ọnụ ụzọ ámá, ma kama, na-agba ọsọ, ọ kọrọ na Pita guzo n'ihu ọnụ ụzọ ámá.
12:15 Ma ha sịrị ya, "Ị bụ crazy." Ma ọ nyeghachiri na nke a bụ ya mere. Mgbe ahụ ha na-ekwu, "Ọ bụ mmụọ ozi ya."
12:16 Ma Pita na-anọgidesi ike na-akụ. Ma mgbe ha meghere, ha hụrụ ya, ha anya.
12:17 Ma motioning ha na aka ya ga-agbachi nkịtị, ọ kọwara otú Jehova duru ya pụọ ​​n'ụlọ mkpọrọ. O wee sị, "Nye ndị James na ụmụnna ndị ahụ nọ." Ma aga, O wee pụọ gaa ebe ọzọ.
12:18 Mgbe ahụ, mgbe ìhè bịara, e nweghị obere ọgba aghara n'etiti ndị agha, dị ka ihe merenụ banyere Peter.
12:19 Na mgbe Herod rịọrọ ya na ha enwetaghị ya, rụsịrị nwere ndị nche ajụjụ, o nyere ha iwu idufu. Na-agbadata si na Judia n'ime Caesarea, ọ ndidu e.
12:20 Ugbu a, ọ bụ onye iwe na ndị Taịa na Saịdọn. Ma ha bịakwutere ya na otu, na, ọ mekwara Blastus, onye bu onye-isi ulo-ndina nke eze, ha rịọrọ maka udo, n'ihi na ha na mpaghara na-ọnọ na nri site na ya.
12:21 Mgbe ahụ, na họpụtara ụbọchị, Herod uwe dị ka eze n'uwe, O wee nọdụ na oche ikpe, na o nyere a okwu na ha.
12:22 Mgbe ahụ ndị mmadụ na-eti mkpu,, "Olu a chi, na bụghị nke a nwoke!"
12:23 Ozugbo, ihe mmụọ ozi Jehova gburu ya, n'ihi na ọ bụghị nyere Chineke nsọpụrụ. Na ọ na e gwusia site ikpuru, o kubiri ume.
12:24 Ma okwu nke Onye-nwe e amụba na-amụba.
12:25 Mgbe Banabas na Sọl, ọ dechara ozi, si Jerusalem, na-eweta na ha John, bụ onye a kpọkwara Mark.
Ọrụ nke Ndịozi 13
13:1 Ma e nwere ndị, na Church ke Antioch, amụma na ndị ozizi, n'etiti ha bụ ndị Barnabas, na Simon, onye a kpọrọ Black, na Lushiọs + onye Saịrini, na Manahen, onye bu nke-Ezi-nne Herod, bú tetrarch, na Saul.
13:2 Ma ka ha na-ejere ozi n'ihi na Jehova na-ebu ọnụ, Mmụọ Nsọ sịrị ha: "Iche Sọl na Banabas m, maka ọrụ a nke m họọrọ ha. "
13:3 Mgbe ahụ, ebu ọnụ ma na-ekpe ekpere na nnukwu ha aka n'isi, ha we zipu ha.
13:4 Na ezitere site Mmụọ Nsọ, ha gara Seleucia. Ha sikwa n'ebe ahụ jiri ụgbọ mmiri gaa Saịprọs.
13:5 Ma mgbe ha rutere Salamis, ha na-ekwusa Okwu Chineke n'ụlọ nzukọ ndị Juu. Ha nwekwara John na-eje ozi.
13:6 Ma mgbe ha gazuru àgwàetiti ahụ dum, ọbụna na-Paphos, ha hụrụ otu nwoke na, a dibịa afa, a onye amụma ụgha, a Jew, onye aha ya bụ Baa-Jesu.
13:7 Ya na-achị ógbè, Sajiọs Pọlọs, nwoke nwere nghọta. nwoke a, akpọ Banabas na Sọl, chọrọ ịnụ Okwu Chineke.
13:8 Ma Elimas onye bụ dibịa afa (n'ihi na otú aha ya dị sụgharịa) guzo imegide ha, na-achọ ime ka ndị na-achị ógbè efep Faith.
13:9 Sọl, onye a na-akpọ Pọl, ọ na e jupụta na Mmụọ Nsọ, legidere ya,
13:10 o wee sị: "Ya mere, full of bụla aghụghọ na nke ụgha nile, nwa nke ekwensu, iro nke niile ikpe ziri ezi, ị Akwụsịbeghị mebie ụzọ ezi omume nke Jehova!
13:11 Ma ugbu a,, le, na aka Jehova dị n'ahụ gị. Na ị ga-kpuo ìsì, nāhughi anyanwu maka a ogologo oge. "Ozugbo a foogu na a ọchịchịrị gbara n'elu ya. Na-awagharị awagharị gburugburu, ọ na-achọ onye pụrụ iduga ya site n'aka.
13:12 Mgbe ahụ-achị ógbè, mgbe ọ hụrụ ihe e mere, kwere, ịnọ na-ijuanya na ozizi Jehova.
13:13 Mgbe Pọl na ndị ya na ha nọ we ụgbọ mmiri si Paphos, ha bịarutere Paga di na Pamfilia. Mgbe ahụ John wee pụọ ma laghachi Jeruselem.
13:14 Ma n'ezie, ha, ejegharị ejegharị na site Paga, bịarute na Antiọk dị na Pisidia. Na n'elu na-abanye n'ụlọ nzukọ n'ụbọchị izu ike, ha we nọdu.
13:15 Mgbe ahụ, mgbe a na-agụ site na Iwu ahụ na ihe ndị amụma kụziri, ndị ndú nke ụlọ nzukọ zigaara ha, si: "Noble ụmụnna, ọ bụrụ na e ọ bụla n'ime gị okwu nkasi ndị mmadụ, -ekwu. "
13:16 mgbe ahụ Paul, ebili na motioning maka ide ji were aka-ya, kwuru: "Ndị ikom Izrel na ị na-atụ egwu Chineke, ege ntị anya.
13:17 Chineke nke ndị Izrel họọrọ nna nna anyị hà, na welie ndi Israel elu, mgbe ha na-biri n'ala Egypt. Na na onye dị elu na ogwe aka, O duuru ha pụọ ​​n'ebe e.
13:18 Na ofụri a oge nke iri afọ anọ, o diri ha omume na mbara.
13:19 Na site n'ibibi mba asa n'ala Kenean, o kewara ha n'ala n'etiti ha site n'ife nza,
13:20 mgbe ra ka nnù abua na iri afọ. Na mgbe ihe ndị a, o nyere ha ndị ikpe, ọbụna ruo mgbe onye amụma Samuel.
13:21 Na mgbe e mesịrị na, ha rịọrọ maka a eze. Na Chineke nyere ha Saul, nwa Kish, otu nwoke si n'ebo Benjamin, ruo afọ iri anọ.
13:22 Na ebe wepụrụ ya, ọ wee nye ha eze, bú Devid. Na àjà-agba akaebe banyere ya, o kwuru, sị, 'Mmokụt David, nwa Jesi, bu nwoke nke dị ka m chepụtara ya, bụ ndị ga-emeli ihe niile m ga-. '
13:23 Site ụmụ ya, + dị ka nkwa, Chineke mere ka Jizọs Onye Nzọpụta ka Israel.
13:24 John nọ na-ekwusa, n'ihu ya biakwa obibia, a baptism nke nchegharị ka ndi nile nke Israel.
13:25 Mgbe ahụ, mgbe John dechara ya n'ezie, ọ na-ekwu: 'M na-adịghị onye ị na-atụle m na-. N'ihi na, le, ọ bịarutere, mgbe m, na akpụkpọ ụkwụ nke onye ụkwụ m eru ka esighi ike. '
13:26 Noble ụmụnna, umu eriri Abraham, na ndị na n'etiti unu nātu egwu Chineke, na ọ bụ gị ka Okwu a nzọpụta e zigara.
13:27 N'ihi na ndị bi na Jerusalem, na ndi-isi, n'ịṅa ntị ma ya, ma ọ bụ na olu ndi-amuma nke na-agụ na bụla izu-ike, emezu ndị a site na-ekpe ikpe ya.
13:28 Na ọ bụ ezie na ha ahughi ihe ọ bula ikpe n'ihi ọnwụ megide ya, ha rịọrọ Paịlet, ka ha wee gbuo ya.
13:29 Ma mgbe ha mezuru ihe nile nke e dere banyere ya, ewere ya ka o si osisi, ha etinye Ya n'ílì.
13:30 Ma n'ezie, Chineke mere ka O si na ndi nwuru anwu n'ụbọchị nke atọ.
13:31 Na ọ hụrụ ọtụtụ ụbọchị ndị ahụ so Ya si na Galili Jerusalem, onye ọbụna ugbu a bụ ndị àmà ya ndị mmadụ.
13:32 Na anyị na-ezikwa unu na Nkwa, nke e mere ka nna anyị hà,
13:33 a na-emezu site na Chineke n'ihi na anyị na ụmụ anyị site bilie Jesus, dị nnọọ ka ọ na-e dere n'abụ ọma nke abụọ na-: 'Ị bụ Ọkpara m. Taa, m nwere amuwo gi.
13:34 Ugbu a, ebe ọ kpọlitere ya n'ọnwụ, ka aba mbiara ikpọkidem, o kwuru nke a: 'M ga-enyekwa unu ihe nsọ nke David, onye kwesịrị ntụkwasị obi. '
13:35 Na kwa mgbe, n'ebe ọzọ, ọ na-ekwu: 'Ị gaghị ekwe ka Onye Nsọ ahụ nke ire ure.'
13:36 n'ihi na Devid, mgbe o jeere ya ozi ya ọgbọ dị na uche Chineke ga-, ede, ọ na enịm ọzọ nna nna ya, na ọ hụrụ ure.
13:37 Ma n'ezie, onye Chineke mere ka osi na ndi nwuru anwu mîkwe ure.
13:38 Ya mere, ka amara gị, magburu ụmụnna, na site na ya, a mara ọkwa na ị ngbaghara site na mmehie na ihe ọ bula nke i enweghịkwa ike izi ezi ka iwu nke Moses.
13:39 Na ya, nile kweere na-agu n'onye ezi omume.
13:40 Ya mere, kpachara anya, ghara ihe e kwuru site ndị amụma kụziri pụrụ irikpu gị:
13:41 'Ị despisers! Lee, na ihe-ebube, na-agbasasịkwa! N'ihi na m na-arụ ọrụ a n'omume na ụbọchị gị, a n'omume nke ị ga-ekweghị, ọbụna ma ọ bụrụ na mmadụ na-akọwa ya unu. ' "
13:42 Mgbe ahụ, ka ha nọ na-apụ apụ, Ha wee jụọ ha ma ọ bụrụ na, ndị na-esonụ izu-ike, ha wee na-ha okwu ndị a.
13:43 Ma mgbe synagogue e asuan, ọtụtụ n'etiti ndị Juu na ndị ọhụrụ na-efe ofufe na-esonụ Pọl na Banabas. na ha, na-ekwu okwu ka ha, mekwara ka ha nọgide na-amara nke Chineke.
13:44 Ma n'ezie, ndị na-esonụ izu-ike, fọrọ nke nta ka obodo ahụ dum wee ọnụ na-anu Okwu nke Chineke.
13:45 Mgbe ahụ ndị Juu, hụrụ ìgwè mmadụ ahụ, ha juputa-ekworo, ha, ikwulu, megidere ihe a nọ na-kwuru site Paul.
13:46 Pọl na Banabas kwuru eguzosi: "Ọ dị mkpa na-ekwu okwu Okwu nke Chineke mbụ gị. Kama n'ihi na unu na-ajụ ya, na otú ewere onwe unu erughị eru inweta ndụ ebighị ebi, le, anyị na-ekpegara ndi mba ọzọ.
13:47 N'ihi na otú nwere na Jehova gwara anyị: 'M eme gị ka ị bụrụ ìhè nke mba ọzọ, ka unu wee mee ka nzọpụta ruo nsọtụ ụwa. ' "
13:48 Mgbe ahụ ndị mba ọzọ, n'elu nụrụ nke a, e gladdened, na ha na-eto Okwu nke Jehova. Na dị ka ọtụtụ ndị dị ka kweere na preordained ndu ebighi-ebi.
13:49 Ugbu a, okwu Jehova nọ na-akwadebe nile region.
13:50 Ma ndị Juu kpaliri ụfọdụ devout na-eme ihe n'eziokwu inyom, na ndi isi nke obodo. Ha kpaliri a mkpagbu megide Pọl na Banabas. Ha wee chụpụ ha n'ihu ha n'akụkụ.
13:51 ma ha, n'ikwe ájá ukwu-ha megide ha, wee na Aịkoniọm.
13:52 The eso ụzọ n'otu aka ahụ jupụtara ọṅù na na Mmụọ Nsọ.
Ọrụ nke Ndịozi 14
14:1 Ugbu a, ọ mere na Iconium na ha banyekọrọ n'ụlọ nzukọ ndị Juu, na ha na-asụ na otú a, ka a oké mmiri ìgwè nke ma ndị Juu ma ndị Grik kwere.
14:2 Ma n'ezie, ndị Juu, bụ ndị na-ekweghị ekwe na-kpaliri na enflamed mkpụrụ obi nke ndị mba ọzọ megide ụmụnna.
14:3 Ya mere, ha nọgidere na-ruo ogologo oge, eme ikwesị ntụkwasị obi n'ime Onyenwe anyị, àjà-agba akaebe na Okwu ya amara, enye ihe ịrịba ama na ihe ebube na-eme site n'aka ha.
14:4 Mgbe ahụ ka ìgwè ndị obodo e kewara. Na-, ụfọdụ ndị ha na ndị Juu, ma n'ezie ndị ọzọ bụ ndị na Ndịozi.
14:5 Ugbu a, mgbe ihe wakpo e zubere site na ndị Jentaịl na ndị Juu na ndị ndú ha, ka ha wee na-emeso ha nlelị na ha nkume,
14:6 ha, ifiọkde a, agbaala ọsọ na Listra, na Dabe, obodo Likeonia, na na dum gbara ya gburugburu region. Na ha na-ekwusa ozi ọma na ebe.
14:7 Ma otù nwoke nọ ọdụ Lystra, nwere nkwarụ n'ụkwụ ya, dara ngwọrọ site n'afọ nne-ya, onye ama mgbe na-eje ije.
14:8 Nwoke a nụrụ Paul na-ekwu okwu. na Paul, ele anya na ya anya, na-aghọta na o nwere okwukwe, ka o wee na-agwọ,
14:9 kwuru na a oké olu, "Guzo ziri ezi n'elu ụkwụ gị!"O wee malie ma ije gburugburu.
14:10 Ma mgbe ìgwè mmadụ ahụ hụrụ ihe Pọl mere, ha we welie olu-ha na Likeonia asụsụ, si, "Ndị bụ chi, ebe e yiri nke ndị ikom, ụmụ anyị!"
14:11 Ha we kpọ Barnabas, 'Jupiter,'Ma n'ezie ha na-akpọ Paul, 'Mercury,'N'ihi na ọ bụ na-edu ndú ọkà okwu.
14:12 Ọzọkwa, onye nchụàjà nke Jupiter, onye ná mpụga obodo, na n'ihu ọnụ ụzọ ámá, eweta na ehi na garlands, dị njikere ka ha chụọ àjà na ndị mmadụ.
14:13 Ka anya dị ka ndị Ndịozi, Banabas na Pọl, nụrụ nke a, n'ịkwatu ha tunics, ha leapt n'ime ìgwè mmadụ, na-eti mkpu
14:14 na-ekwu: "Men, gịnị mere ị ga-eme nke a? Anyị na-na-mmadụ, ndị ikom dị ka onwe unu, ekwusa ozi ọma na ị ga-tọghatara, ihe efu, Chineke ahụ dị ndụ, onye mere eluigwe na ụwa na oké osimiri na ihe niile dị na ha.
14:15 Na aga na ọgbọ, o kwere ka mba nile na-eje ije na ha onwe ha ụzọ.
14:16 ma na-, ọ hapụghị onwe ya n'enweghị ihe àmà, eme ihe ọma si n'elu-igwe, enye mmiri ozuzo na oge mkpụrụ ji amị, na-ejuputa ha obi na nri ọṅụ. "
14:17 Na site na-ekwu ihe ndị a, ha sonso ike igbochi ìgwè mmadụ ahụ immolating ha.
14:18 Ugbu a ndị Juu ụfọdụ si Antiọk na Aịkoniọm rutere n'ebe. Na ebe rụgide ìgwè mmadụ, ha wee tụọ Pọl nkume ma dọkpụpụ ya n'azụ obodo, na-eche echiche ya na-anwụ.
14:19 Ma, dị ka ndị na-eso ụzọ ya guzo ya gburugburu,, enye adaha ada wee banye n'ime obodo. Na-esote ụbọchị, ọ malitere ye Barnabas Dabe.
14:20 Ma mgbe ha ọkọkwọrọ na obodo, na kụziiri ọtụtụ, ha laghachiri ọzọ na Listra, na Aịkoniọm, na Antiọk,
14:21 ewusi mkpụrụ obi nke ndị na-eso ụzọ, na-agba ume, ha na ha kwesịrị ịnọgide na-n'okwukwe, na na ọ dị mkpa ka anyị na-aba n'alaeze nke Chineke site n'ọtụtụ mkpagbu.
14:22 Ma mgbe ha guzosie ike nchu-àjà maka ha ọ bụla na chọọchị, na kpere ekpere na-ebu ọnụ, ha jaa ha mma Jehova, bụ onye ha kweere.
14:23 Na-ejegharị ejegharị site n'ụzọ nke Pisidia, ha rutere na Pamfilia.
14:24 Na ebe kwuru na okwu Jehova na Paga, ha wee banye n'ime Attalia.
14:25 Ma si n'ebe ahụ, ha nēje Antiọk, ebe ha nọ na-otoro na-amara nke Chineke maka ọrụ nke ha ugbu a mezuru.
14:26 Mgbe ha bịarutere ma kpọkọta ụka, ha na-akọ ihe uku Chineke mere site n'aka ha, na otú o si meghee ụzọ nke okwukwe na nke ndị Jentaịl.
14:27 Ha wee biri n'ihi na ọ dịghị obere ego nke oge na-eso ụzọ.
Ọrụ nke Ndịozi 15
15:1 Mgbe ụfọdụ ndị, agbadata si na Judia, na-ezi ndị ụmụnna, "Ọ bụrụ na ị na-úgwù dị ka omenala si n'aka Mozis, ị nwere ike ghara-azọpụta. "
15:2 Ya mere, mgbe Pọl na Banabas mere abụghị obere nsogbu megide ha, ha kpebiri na Pọl na Banabas, na ụfọdụ ndị si n'akụkụ nke ọzọ, gbagoo gaa ndi ozi na ndị nchụàjà Jerusalem banyere ajụjụ a.
15:3 Ya mere, a na-edu ụka, ha gara ije Finishia ma Sameria, -akọwa na ntughari nke ndi mba ọzọ. Ha mere ka oké ọṅù n'etiti ụmụnna nile.
15:4 Ma mgbe ha rutere Jerusalem, ha natara site na chọọchị ahụ na ndịozi na ndị okenye, akuko oké ihe ndị Chineke mere site n'aka ha.
15:5 Ma ụfọdụ si n'òtù ndị Farisii,, ndị bụ ndị kwere ekwe, bilie si, "Ọ dị mkpa ka ha úgwù ma ka a na-ezi na-edebe Iwu nke Moses."
15:6 Na ndịozi na ndị okenye bịara ọnụ na-elekọta nke okwu a.
15:7 Na mgbe a oké esemokwu merenụ, Pita biliri ọtọ, sị ha: "Noble ụmụnna, ị maara na, -adịbeghị anya ụbọchị, Chineke horo si n'etiti anyị,, site n'ọnụ m, Ndi mba ọzọ ka ha nụrụ okwu nke Gospel na ikwere.
15:8 na Chineke, onye maara obi, Wepụta àmà, site n'inye Mmụọ Nsọ ha, dị nnọọ ka anyị.
15:9 Ọ dị iche ihe ọ bụla n'etiti anyị na ha, -edo obi ha site n'okwukwe.
15:10 ugbu a,, ihe mere i ji nwaa Chineke ịmanye a yok n'olu nke na-eso ụzọ, nke ma nna anyị hà ma ọ bụ anyị nwere ike iburu?
15:11 Ma site n'amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, anyị kwenyere iji zọpụta, na n'otu ụzọ ahụ dị ka ha. "
15:12 Mgbe ahụ dum ìgwè bụ nkịtị. Ha nọ na-ege Banabas na Pọl, -akọwa ihe oké ihe ịrịba ama na ihe ebube Chineke rụworo n'etiti mba site na ha.
15:13 Ma mgbe ha kemgbe nkịtị, James gwara ha, sị: "Noble ụmụnna, gee m ntị.
15:14 Simon ya kọwara na ihe n'ụzọ Chineke na mbụ gara, ka ihe ndị sitere na ndi mba ọzọ a ndị mmadụ aha ya.
15:15 Na okwu Ndị Amụma ndị na nkwekọrịta nke a, dị nnọọ ka e dere:
15:16 'Mgbe ihe ndị a, M ga-alaghachi, m ga-ewughachikwa ebe-obibi nke David, nke dara ada. M ga-ewughachikwa mkpọmkpọ ebe ya, na m ga-ewu ya,
15:17 nke mere na ike nke ndị mmadụ nwere ike ichọ Jehova, tinyere mba niile ahụ, bụ aha m e kpọkuru, ka Jehova kwuru, na-eme ihe ndị a. '
15:18 Jehova, ọrụ nke ya a mara site na mgbe ebighị ebi.
15:19 N'ihi nke a, M na-ekpe ikpe na ndị na-a tọghatara Chineke si n'etiti ndị mba ọzọ a gaghị amakwa jijiji,
15:20 ma kama ka anyị degara ha, ka ha we debe onwe-ha n'aka-emetọ arụsị, na ịkwa iko, na site na ihe ọ bụla e adịghị ekwe, na ọbara.
15:21 n'ihi na Moses, site n'oge ochie, nwere nke ọ bụla n'obodo ndị na-ekwusa ya n'ụlọ nzukọ, ebe ọ na-agụ na bụla Sabbath. "
15:22 Mgbe ahụ ọ dị mma n'anya ndịozi na ndị okenye, na-ahụ dum Church, ịhọrọ ndị ikom si n'etiti ha, na izipu na Antioch, na Pọl na Banabas, na Judas, bụ onye a kpọkwara Barsabbas, na Saịlas, kachanụ mmadụ n'etiti ụmụnna,
15:23 ihe e dere site aka ha: "Ndịozi na ndị okenye, ụmụnna, ndị na-n'Antiọk na Siria na Silishia, ụmụnna si mba ọzọ, ekele.
15:24 Ebe ọ bụ na anyị nụrụ na ụfọdụ, aga si n'etiti anyị,, nwere nsogbu ị na okwu, eduhie mkpụrụ obi unu, onye anyị nyere ọ dịghị iwu,
15:25 ọ dị mma n'anya anyị, a na-kpọkọtara dị ka otu, ịhọrọ ndị ikom na ndị na-ezite ha ka ha gị, na anyị kasị hụrụ n'anya Banabas na Pọl:
15:26 ndị mmadụ ndị enyefe ndụ ha na nnọchite nke n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
15:27 Ya mere, anyị zigara Judas na Saịlas, onye onwe ha kwa ga-, na okwu, hà na-akwado gị otu ihe.
15:28 N'ihi na a di nma n'anya Mọ Nsọ na anyị ịmanye dịghị ihe ọzọ ibu arọ gị, ndị ọzọ karịa ndị a dị mkpa:
15:29 ka unu ghara ihe immolated arụsị, na ọbara, na site n'ihe niile e adịghị ekwe, na ịkwa iko. Ị ga-eme nke ọma iburu zere ihe ndị a. Farewell. "
15:30 Ya mere, ọ na e asuan, ha gbadaa Antiọk. Na-achịkọta ìgwè ọnụ, nye ya akwukwọ.
15:31 Ma mgbe ha na-agụ ya, ha na-gladdened a nkasi-obi.
15:32 Ma Judas na Saịlas, bụkwa amụma ha, kasiri ụmụnna na ọtụtụ okwu, na ha na-ike.
15:33 Mgbe ahụ, ama okodu ụfọdụ ndị ọzọ oge e, ha na-asuan na udo, Ụmụnna, ndị zitere ha.
15:34 Ma, ọ di nma n'anya Silas nọgide na-ahụ. Ya mere Judas naanị la Jerusalem.
15:35 Na Pọl na Banabas nọgidere n'Antiọk, na ọtụtụ ndị ọzọ, ezi ihe ma na izisa ozi ọma nke Okwu Chineke.
15:36 Mgbe ahụ, mgbe ụbọchị ụfọdụ gasịrị, Pọl gwara Banabas, "Ka anyị laghachi gaa ụmụnna obodo nile nke anyị na-ekwusa Okwu nke Chineke, ịhụ otú ha bụ. "
15:37 Na Banabas chọrọ ka John, bụ onye a kpọkwara Mark, na ha nwekwara.
15:38 Ma Pọl na-ekwu na o kwesịkwaghị ka natara, ebe ọ hapụ ha na Pamfilia, na ọ na-arahụ na ha na-arụ ọrụ.
15:39 Na e mere a nkewa, na ruo n'ókè nke na ha si na onye ọzọ. na Banabas, n'ezie na-ewere Mark, Saiprọs.
15:40 Ma n'ezie, Paul, ị na-ahọrọ Silas, setịpụrụ, a napụtara site ụmụnna na amara nke Chineke.
15:41 O wee gaa site na Siria na Silishia, ikwado ndị Churches, ịkụziri ha na-edebe iwu nke Ndịozi na ndị okenye.
Ọrụ nke Ndịozi 16
16:1 Mgbe ahụ wee bịarute na Dabe na Lystra. Ma, le, a-eso ụzọ Jizọs aha ya bụ Timoti nọ n'ebe, nwa a kwesịrị ntụkwasị obi nwaanyị Juu, nna a Gentile.
16:2 Ụmụnna ndị nọ na Listra na Aịkoniọm sụgharịrị ezi àmà ya.
16:3 Pọl chọrọ ka nwoke a iso ya mee njem, na-ewere ya, ọ biri ya úgwù, n'ihi na ndị Juu bụ ndị nọ n'ebe ndị ahụ. N'ihi na mmadụ niile maara na nna ya bụ onye Jentaịl.
16:4 Ka ha nọ na njem site na obodo, ha naputa ha na nkwenkwe ka a kpọchie, nke e nyere iwu ndị ndịozi na ndị okenye, ndị nọ na Jeruselem.
16:5 Na-, na Churches a nọ na-ewusikwu okwukwe na nọ na-amụba na ole ụbọchị ọ bụla.
16:6 Mgbe ahụ, mgbe agafe site na Frijia na obodo Galeshia, ha na-gbochiri ndị mmụọ nsọ si ekwu okwu Okwu na Asia.
16:7 Ma mgbe ha rutere n'ebe Mishia, ha nwara ịbanye Bitinia, ma Mọ nke Jisus ekweghi ekwe ha.
16:8 Mgbe ahụ, Mgbe ha gafetara site Mishia, ha gbadata gakwuru Troas.
16:9 Na a ọhụụ n'abalị ekpughere nye Paul nke otù nwoke nke Macedonia, guzo na-riọ Ya, na-ekwu: "Obe na Masedonia nyere anyị aka!"
16:10 Mgbe ahụ, mgbe ọ hụrụ ọhụụ, ozugbo anyị chọrọ ịga Macedonia, ebe e mesiri obi ike na Chineke na-akpọ anyị ka anyị ozi ọma ha.
16:11 Na ụgbọ si Troas, na-ewere a kpọmkwem ụzọ, anyị rutere Samothrace, na ndị na-esonụ ụbọchị, na Neapolis,
16:12 ma si n'ebe ahụ gaa Filipaị, nke bụ kachanụ obodo na mpaghara nke Macedonia, a ógbè. Ugbu a, anyị nọ na obodo a ụbọchị ụfọdụ, jụsịrị ọnụ.
16:13 Mgbe ahụ, n'ụbọchị izu ike, anyị nọ na-eje ije mpụga ọnụ ụzọ ámá, n'akụkụ osimiri, ebe e yiri ka a na ekpere nzukọ. Nọdụ ala, anyị nọ na-ekwu na ndị inyom gbakọrọ.
16:14 Na otu nwaanyị, aha ya bụ Lidia, a ere ákwà odo odo na obodo Tayataịra, a na-efe Chineke, ntị. Jehova meghere obi ya na-anabata ihe Pọl na-ekwu.
16:15 Na mgbe ọ na e mere baptizim, na ezinụlọ ya, ọ rịọrọ anyị, si: "Ọ bụrụ na ị ewerewo m dị ka onye kwesịrị ntụkwasị obi ka Jehova, batanụ n'ime ụlọ m na-ebi n'ebe ahụ. "O mere ka o doo anyị.
16:16 Mgbe ahụ, ọ mere ka, ka anyị nọ na-aga ekpere, a na-girl, nwere mmụọ nke ịgba afa, zutere na anyị. Ọ bụ isi iyi nke ukwuu uru na nna ya ukwu, site na ya agba afa ọkụ.
16:17 Nke a girl, esonụ anyị na Pọl ma, eti mkpu, si: "Ndị a bụ ndị ohu nke Chineke Onye Kasị Elu! Ha na-ezikwa gị ụzọ nzọpụta!"
16:18 Ugbu a, ọ kpara àgwà n'ụzọ dị otú a ruo ọtụtụ ụbọchị. ma Pọl, a na-mwute, tụgharịa gwa mmụọ, "M na-enye gị iwu ka, n'aha nke Jesus Christ, na-aga site na ya. "Ma ọ lawa hour.
16:19 Ma nna ya ukwu, ịhụ na olileanya nke ha uru je, -achọ ijide ya, Pọl na Saịlas, ha we me ha ka ha na-achị achị n'ụlọ ikpe ahụ ịgba.
16:20 Na-eweta ha ka ha ndị nduzi obodo, ha kwuru: "Ndị a na-enye nsogbu anyị obodo, ebe ha bụ ndị Juu.
16:21 Ha na-ezikwa a ụzọ nke iwu na-akwadoghị ka anyị nabata ma ọ bụ na-edebe, ebe anyị bụ ndị Rom. "
16:22 Na ndị mmadụ ọsọ ọnụ megide ha. Na ndị nduzi obodo, n'ịkwatu ha tunics, nyere iwu ka ha-apịa ya mkpara.
16:23 Ma mgbe ha na-akpatara ọtụtụ ụtarị akpụkpọ anụ na ha, ha tubà ha n'ulo-nkpọrọ, akụziri ndị nche na-ekiri ha ịdị uchu.
16:24 Ma ebe ọ bụ na ọ natara ụdị iji, o wepụrụ ha n'ime ime ụlọ mkpọrọ cell, o nanị ụkwụ ha na ebuka.
16:25 Mgbe ahụ, na n'etiti abalị, Pọl na Saịlas nọ na-ekpe ekpere ma na-eto Chineke. Na ndị na-bụ ndị na-eji na-ege ha ntị.
16:26 Ma n'ezie, enwere a mberede ala ọma jijiji, nnọọ ukwuu nke na ntọala nke ụlọ mkpọrọ ahụ kpaliri. Ozugbo ụzọ nile e meghere, na bindings nke onye ọ bụla e wepụtara.
16:27 Mgbe ahụ n'ụlọ mkpọrọ nche, ebe e jarred anya, na ịhụ ọnụ ụzọ nke ụlọ mkpọrọ ahụ na-emeghe, mịịrị mma agha ya bu n'obi igbu onwe ya, chere na ndị mkpọrọ ahụ ọsọ.
16:28 Ma Pọl tiri mkpu n'oké olu, si: "Mee ọ dịghị nsogbu ka onwe gị, n'ihi na anyị niile ebe a!"
16:29 Mgbe ahụ na-akpọ maka a ìhè, ọ banyere. na ịma jijiji na-, ọ dara n'ihu ụkwụ Pọl na Saịlas.
16:30 Na-azụlitenụ ha ná mpụga, o kwuru, sị, "Ndị nwe, ihe m ga-eme, nke mere na m nwere ike zọpụta?"
16:31 Ya mere ha siri, "Kwere n'Onyenwe anyị Jizọs, mgbe ahụ ị ga-azọpụta, na ezinụlọ gị. "
16:32 Ha we gwa Okwu nke Onyenwe anyị na ya, tinyere ndị niile na-n'ụlọ ya.
16:33 o, na-ewere ha na otu hour nke abali, saa ha ụtarị akpụkpọ anụ. Na e mere ya baptizim, na-esote ezinụlọ ya dum.
16:34 Ọ we me ka ha bata n'ulo-ya, ọ we do a table maka ha. Na ọ bụ na-enye ọṅụ, na ezinụlọ ya dum, ikwere na Chineke.
16:35 Na mgbe ìhè bịarutere, ndị nduzi obodo zipụrụ ndị na-ejere, si, "Hapụ ndị ahụ."
16:36 Ma mkpọrọ nche kọrọ okwu ndị a Paul: "The nduzi obodo ziteere unu wepụtara. ugbu a,, wezuga. Gaa n'udo. "
16:37 Ma Pọl sịrị ha: "Ha pịara anyị ihe n'ihu ọha, ezie na anyị na-adịghị ikpe. Ha fere bụ ndị Rom n'ụlọ mkpọrọ. Na ugbu a ha ga-ụgbọala anyị pụọ na nzuzo? Ọ bụghị otú ahụ. Kama, ka ha na-abịa n'ihu,
16:38 ka ayi-achụpụkwa ha. "Mgbe ahụ ndị na-ejere kọrọ okwu ndị a ndị nduzi obodo. Na nụrụ na ha bụ ndị Rom, ha we tua egwu.
16:39 na bịarutere, ha rịọrọ ha ka ha, ma na-eduga ha, ha we riọ ha ka ha si n'obodo ahụ pụọ.
16:40 Ha wee si n'ebe ahụ n'ụlọ mkpọrọ ma banye n'ime ụlọ nke Lydia. Na ha hụrụ ụmụnna, ha kasiri ha, na mgbe ahụ, ha gawara.
Ọrụ nke Ndịozi 17
17:1 Ma mgbe ha jere ije na ya site Amphipolis na Apọlonịa, ha bịarutere Thessalonica, ebe e nwere ụlọ nzukọ ndị Juu.
17:2 mgbe ahụ Paul, dị ka omenala, banyere ha. Na maka ụbọchị izu ike atọ ọ rụrụ ụka na ha gbasara Akwụkwọ Nsọ,
17:3 nke na-atụgharị na-ewere ya na ọ dị mkpa ka Kraịst taa ahụhụ, ka ebili ọzọ si na ndị nwụrụ anwụ, nakwa na "a bụ Jizọs Kraịst, ndị m na-ezikwa unu ihe. "
17:4 Na ụfọdụ n'ime ha kweere na e jikọtara ejikọta Pọl na Saịlas, na a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị a si efe na ndi mba ọzọ, na ọtụtụ ndị magburu inyom.
17:5 Ma ndi-Ju, ịbụ na-ekwo ekworo, na isonye na ụfọdụ eme ihe ọjọọ n'etiti ndị nkịtị ikom, mere a nsogbu, na ha kpaliri obodo. Na-elu a na ọnọdụ nso ulo Jason, ha we chọ ha duru ha gaa ndị mmadụ.
17:6 Ma mgbe ha ahụghị ha, ha dọkpụụrụ Jesin na ụmụnna ụfọdụ gakwuru ndị na-achị obodo, na-eti mkpu: "N'ihi na ndị a bụ ndị kpaliri obodo. Ha bịara ebe a,
17:7 Jesin nabatakwara ha. Na niile ndị ikom ndị a mee ihe megidere iwu Siza, na-ekwu na e nwere eze ọzọ, Jesus. "
17:8 Na ha kpaliri ndị mmadụ. Na ndị na-achị obodo, n'elu nụrụ ihe ndị a,
17:9 na ọ natara nkọwa si Jason na ndị ọzọ, tọhapụrụ ha.
17:10 Ma n'ezie, ụmụnna n'egbughị zipụrụ ma Pọl ma Saịlas ka n'abalị ka Beroea. Ma mgbe ha rutere, ha banyere n'ụlọ nzukọ ndị Juu.
17:11 Ma ndia bu ihe magburu onwe ya karịa ndị na Tesalonaịka. Ha natara Okwu nile ịnụ ọkụ n'obi, kwa-enyocha Akwụkwọ Nsọ na-ahụ ma ọ bụrụ na ihe ndị a bụ.
17:12 ma n'ezie,, ọtutu madu kwere n'etiti ha, nakwa dị ka na-a ole na ole n'ime kwesịrị nsọpụrụ Gentile ikom na ndị inyom.
17:13 Mgbe ahụ, mgbe ndị Juu nke Thessalonica ama ghọtara na Okwu Chineke na-ekwusa site Paul na Beroea, ha wee e nwekwara, na-akpali ịsọ na-enye nsogbu ìgwè.
17:14 Ma mgbe ahụ ụmụnna ngwa ngwa zigara Paul pụọ, ka o wee na-aga site na oké osimiri. Ma Saịlas na Timoti nọgidere n'ebe.
17:15 Mgbe ahụ ndị na-edu Pọl duuru ya ruo Atens. Na ọ natara iwu site n'aka ya ka Saịlas na Timoti, na ha ga-abịa ya ngwa ngwa, Ha si.
17:16 Ma ka Pọl na-echere ha n'Atens,, ya mmụọ kpaliri n'ime ya, ọ na-ahụ obodo nyere ka ikpere arụsị.
17:17 Ya mere, ọ na-ese okwu na ndị Juu nọ n'ụlọ nzukọ, na na na-efe, na ke eferife, ofụri kwa ụbọchị, na onye ọ bụla nọ n'ebe.
17:18 Ugbu a ụfọdụ òtù Epikurọs na Stoic ọkà ihe ọmụma na-arụ ụka ya na ya. Na ụfọdụ na-ekwu, "Gịnị ka nke a na-agha mkpụrụ nke Okwu chọrọ ikwu?"Ma ndị ọzọ nọ na-asị, "O yiri onye na ihe ogwaokwu maka ọhụrụ mmụọ ọjọọ." N'ihi na ọ nọ na-akpọsa ha Jizọs na mbilite n'ọnwụ.
17:19 Na apprehending ya, ha we me ya ka n'Ariopagọs, si: "Ọ bụ na anyị nwere ike ịmata ihe a na ozizi ọhụrụ bụ, banyere nke ị na-asụ?
17:20 N'ihi na ị na-eme ka ụfọdụ echiche ọhụrụ anyị ntị. Ya mere, anyị ga-achọ ịmata ihe ihe ndị a pụtara. "
17:21 (Ugbu a niile ndị Atens, na bịarutere ọbịa, na-bi onwe ha na ọ dịghị ihe ọzọ karịa na-ekwu okwu ma ọ bụ na-anụ dị iche iche echiche ọhụrụ.)
17:22 ma Pọl, guzo n'etiti Ariopagọs, kwuru: "Ndị ikom Atens, Ana m aghọta na, n'ihe niile ị na-kama nkwenkwe ụgha.
17:23 N'ihi na dị ka m na-agafe ma na-ahụkarị gị arụsị, Ahụkwara m otu ebe ịchụàjà, na nke e dere: TO na-amaghị ama CHINEKE. Ya mere, ihe ị na-efe n'amaghị, nke a bụ ihe m na-ekwusa ozi ọma ka i:
17:24 Chineke nke kere ụwa na ihe niile dị n'ime ya, Onye bụ Onyenwe eluigwe na ụwa, onye na-adịghị ebi n'ụlọ nsọ e ji aka.
17:25 Adịghịkwa ozi site n'aka ndị mmadụ, dị ka ma ọ bụrụ na mkpa nke ihe ọ bụla, ebe ọ bụ onye na-enye mmadụ niile ihe ndụ na ume na ihe niile ọzọ.
17:26 Na o mere ka, n'otu, ezinụlọ ọ bụla nke mmadụ: na-ebi ndụ n'elu ụwa dum, ịchọpụta na họpụtara kara aka na ókè nke ha ebe-obibi-,
17:27 ka na-achọ Chineke, ma ọ bụrụ na ikekwe ha nwere ike na-ele ya ma ọ bụ chọta ya, ezie na ọ nọghị n'ebe dị onye ọ bụla n'ime anyị.
17:28 'N'ihi na ya na anyị dị ndụ, na aga, ma na-adị. 'Dị nnọọ ka ndị nke gị na-ede uri kwuru. 'N'ihi na anyị bụkwa ndị ezinụlọ ya.'
17:29 Ya mere, ebe anyị bụ ndị ezinụlọ nke Chineke, anyị ga-agaghị na-atụle ma ọ bụ ọlaedo na ọlaọcha ma ọ bụ nkume, ma ọ bụ ndị a tụrụ atụ nke na nkà na nke nchepụta nke mmadụ, na-a yiri ihe Divine.
17:30 ma n'ezie,, Chineke, ọ ele anya ala ịhụ amaghị nke a ugboro, ugbu a mara ọkwa na ndị na onye ọ bụla nọ n'ebe nile ime penance.
17:31 N'ihi na ọ họpụtara a ụbọchị nke o ga-ekpe ụwa ke hara nhatanha, site na nwoke onye ọ họpụtara, àjà okwukwe niile, site n'ịzụ ya n'ọnwụ. "
17:32 Ma mgbe ha nụrụ banyere mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, n'ezie, ụfọdụ bụ derisive, ebe ndị ọzọ sịrị, "Anyị ga-ege gị ntị banyere nke a ọzọ."
17:33 N'ihi ya, Pọl we si n'etiti ha.
17:34 Ma n'ezie, ndikom ufọdu, n'ịgbaso ya, mere kwere. Otu n'ime ndị a bụ ndị na-Daịọnisiọs onye Areọpagọs, na a nwaanyị aha ya bụ Damaris, ha na ndi ọzọ.
Ọrụ nke Ndịozi 18
18:1 Mgbe ihe ndị a, ọ hapụrụ Atens, ọ bịarutere Corinth.
18:2 Na n'elu na-achọta otu onye Juu aha Aquila, mụrụ na Pọntọs, na nso nso rutere si Italy na Priscilla nwunye ya, (n'ihi na Klọdiọs nyere iwu niile Juu pụọ na Rom,) ya na ha zukọrọ.
18:3 Na n'ihi na ọ bụ nke otu ahia, ọ ndidu ha na ha na-arụ ọrụ. (Ugbu a, ha bụ ịkpa ákwà ụlọikwuu ahia.)
18:4 Ọ na-arụ ụka na synagogue ke kpukpru sabbath, ewebata aha Onyenwe anyị Jizọs. Ọ na kwenye Juu ma ndị Grik.
18:5 Ma mgbe Saịlas na Timoti gara si Macedonia, Paul guzosiri ike na Okwu, àmà ndị Juu na Jizọs bụ Kraịst.
18:6 Ma ebe ọ bụ na ha na-Ma o ya na o kwuluru, o fechara uwe ya ma sị ha: "Ka ọbara bụ na gị onwe gị isi. M ọcha. Site ugbu a gaba, M ga-aga mba ọzọ. "
18:7 Na-akpụ akpụ site na ebe, ọ banyere n'ime ụlọ, otu nwoke, aha ya bụ Titus ndị Dị nnọọ, a na-efe Chineke, onye ụlọ ya adjoined na synagogue.
18:8 ugbu a Krispọs, a ndú nke synagogue, kwere na Onye-nwe, na ndị niile ya na ụlọ. Ọtụtụ n'ime ndị Kọrịnt, n'elu ntị, kweere na e mere ha baptizim.
18:9 Jehova we si ka Paul, site a ọhụụ n'abalị: "Atụla ụjọ. Kama, ekwu okwu ma na-adịghị ga-agbachi nkịtị.
18:10 N'ihi na m nọnyeere gị. Na ọ dịghị onye ga-enweta gị, ka ị na-emerụ. N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo a bụ na m. "
18:11 Mgbe ahụ, ọ biri n'ebe a afọ na ọnwa isii, akụziri Okwu nke Chineke n'etiti ha.
18:12 Ma mgbe Galio bụ onye ọchịchị ógbè Akeya, ndị Juu ji otu obi bilie megide Pọl. Ha we me ya ka ikpe,
18:13 si, "Ọ enyikde ndị mmadụ na-efe Chineke n'ụzọ megidere iwu."
18:14 Mgbe ahụ, mgbe Pọl nọ na-amalite na-asaghe ọnụ ya, Galio gwara ndị Juu,: "Ọ bụrụ na nke a bụ ụfọdụ ihe na-ezighị ezi, ma ọ bụ a ọjọọ, O magburu Juu, M ga-akwado gị, dị ka kwesịrị ekwesị.
18:15 Ma ọ bụrụ na n'ezie ndị a bụ ajụjụ banyere a okwu na aha na iwu gị, ị kwesịrị ị na-ahụ ya onwe-unu. M ga-abụ onyeikpe nke ndị dị otú ahụ ihe. "
18:16 Na o nyere ha iwu si ikpe.
18:17 ma ha, apprehending Sọstenis, a ndú nke synagogue, ẹmia enye ke iso itie ikpe. Na Galio gosiri na nchegbu maka ihe ndị a.
18:18 Ma n'ezie, Paul, mgbe ọ nọgidere ruo ọtụtụ ụbọchị, enwe kwuru goodbye ụmụnna, ụgbọ mmiri n'ime Syria, na ya na ya bụ Prisila na Akwịla. Ugbu a ọ kpụrụ isi ya na Senkrea, n'ihi na o mere a nkwa.
18:19 Na ọ bịarutere Ephesus, ọ hapụkwara ha n'ebe ahụ. Ma n'ezie, ya onwe ya, abanye n'ime synagogue, e na-ese okwu na ndị Juu.
18:20 Mgbe ahụ, ọ bụ ezie na ha na-arịọ ya ka ọ nọrọ ruo a ogologo oge, ọ ga-ekweta.
18:21 Kama, si goodbye na-agwa ha, "M ga-alọghachikwutekwa unu ọzọ, Chukwu kwado,"O si n'Efesọs.
18:22 Na mgbe na-agbada Caesarea, ọ rigoro Jerusalem, o kelere ndị Church e, na mgbe ahụ rịdata Antiọk.
18:23 Na ọ nọrọ ụfọdụ ogologo oge e, ọ malitere, na o jere ije iji site na obodo Galeshia na Frijia, ike niile na-eso ụzọ.
18:24 Ma otu onye Juu aha ya bụ Apollo, mụrụ na Alexandria, onye bụ ọkà onye dị ike na Akwụkwọ Nsọ, bịarute na Ephesus.
18:25 Ọ mụtara na Way nke Jehova. Na ịbụ-ekpesi ike na mmụọ, ọ na-ekwu ma na-akụziri ihe ndị na-of Jesus, ma ebe ọ maara na baptism nke Jọn.
18:26 Ya mere, ọ malitere ime ihe n'ikwesị ntụkwasị obi na synagogue. Na mgbe Prisila na Akwịla nụrụ ya, ha we wezuga ya ma kọwaara Way nke Onyenwe anyị na ya ọzọ juputara.
18:27 Mgbe ahụ, ebe ọ chọrọ ịga na Achaia, ụmụnna degaara ndụmọdụ ndị na-eso ụzọ, ka ha wee na-anabata ya. Na mgbe o rutere, o nwere ọtụtụ mkparịta ụka ndị kwere ekwe.
18:28 N'ihi na ọ bụ vehemently na n'ihu ọha akatọnụ ndị Juu, na-ekpughere site n'Akwụkwọ Nsọ na Jizọs bụ Kraịst.
Ọrụ nke Ndịozi 19
19:1 Ugbu a, ọ mere ka, mgbe Apollo bụ na Corinth, Paul, ke enye ama njem gafee elu na mpaghara, bịarute na Ephesus. Na enye okosobode ye ụfọdụ na-eso ụzọ.
19:2 Na ọ sịrị ha, "Mgbe ikwere, i natara mmụọ nsọ?"Ma ha sịrị ya, "Anyị adịghị ọbụna nụrụ na e nwere mmụọ nsọ."
19:3 Ma n'ezie, o kwuru, sị, "Mgbe ahụ na ihe ka ị na-ana baptism?"Ha we si, "Na baptism nke Jọn."
19:4 Pọl wee sị: "John baptizim na ndị na baptism nke nchegharị, na-ekwu na ha kwere na Onye ahụ a na-abịa n'azụ ya, nke ahụ bụ, na Jesus. "
19:5 Mgbe ọ nụrụ ihe ndị a, e mere ha baptizim n'aha Onyenwe anyị Jizọs.
19:6 Na mgbe Pọl nyekwara iwu aka ya na ha, Mmụọ Nsọ wee n'elu ha. Na ha na-ekwu okwu na asụsụ dị iche iche na-ebu amụma.
19:7 Ndị nọ dị ihe dị iri na abụọ na niile.
19:8 Mgbe ahụ, n'elu na-abanye n'ụlọ nzukọ, ọ na-ekwu n'ikwesị ntụkwasị obi ruo ọnwa atọ, nagwa ha okwu ha banyere alaeze Chineke.
19:9 Ma mgbe ụfọdụ ndị ghọrọ obi tara mmiri na ekweghị, ọnụ Ụzọ nke Onyenwe anyị na ọnụnọ nke ìgwè, Paul, wezụgara si ha, iche na-eso ụzọ, na-ese okwu kwa ụbọchị na a ụfọdụ nke ụlọ akwụkwọ nke Tyrannus.
19:10 Ugbu a, a na-arụ ná afọ abụọ, mere na ndị niile bụ ndị biri na Asia ntị Okwu nke Chineke, ma ndị Juu na ndị Jentaịl.
19:11 Na Chineke na-emezu dị ike na ihe ọhụrụ ọrụ ebube site n'aka Paul,
19:12 nke mere na ọbụna mgbe obere ákwà na wrappings e si ozu-ya na-arịa ọrịa, ọrịa hapụ ha na ndị mmụọ ọjọọ la.
19:13 Mgbe ahụ, ọbụna ụfọdụ ndị na-ejegharị ejegharị ndị Juu exorcists ama nwara akpọkukwa aha Onyenwe anyị Jizọs + n'isi ndị nwere ajọ mmụọ na-, si, "M na-eke agbụ gị site iyi site Jesus, emi Paul ọkwọrọde. "
19:14 Ma e nwere ndị Juu ụfọdụ, na ụmụ ndị ikom asaa nke akpọ Siva, isi n'etiti ndị nchụàjà, onye na-eme n'ụzọ dị otú a.
19:15 Ma a ajọ mmụọ gwara ha, sị ha: "Jesus m maara, na Paul m maara. Ma olee ndị unu?"
19:16 Nwoke, onye bụ ajọ mmụọ, awụli elu na ha na-na-mma nke ha ma, ike imegide ha, nke mere na ha ọsọ na-ulo, gba ọtọ ma merụọ.
19:17 Ya mere, a niile wee mata ndị Juu na ndị Jentaịl, ndị bi n'Efesọs. Na a egwu dara ha niile. Na aha Onyenwe anyị Jizọs otuto.
19:18 Na ọtụtụ ndị kwere ekwe na-erute, ekwupụta, na-ezikwa ha na-eme.
19:19 Mgbe ọtụtụ n'ime ndị na-eso iberibe ịrọ òtù ada ọnụ ha akwụkwọ, na ha kpọọ ha n'anya niile. Na mgbe na-ekpebi uru nke ndị a, ha hụrụ na price na-puku mmadụ iri ise mkpụrụ ego dinarịọs.
19:20 N'ụzọ nke a, Okwu Chineke na-amụba ike na a na-egosi na.
19:21 Mgbe ahụ, mgbe ihe ndị a e dechara, Paul kpebiri na Mmụọ, mgbe agafe site Macedonia na Achaia, gaa Jerusalem, si, "Mgbe ahụ, mgbe m ruru ebe ahụ, ọ dị mkpa ka m na-ahụ Rome nwekwara. "
19:22 Ma-eziga abụọ nke ndị na-ejere ya ozi, Timoti na Erastus, n'ime Macedonia, ya onwe ya nọrọ oge na Asia.
19:23 Ugbu a n'oge ahụ, e mere abụghị obere nsogbu banyere Way nke Jehova.
19:24 N'ihi na otu onye aha ya bụ Dimitriọs, a ọlaọcha na-eme ka ọlaọcha arụsị maka Diana, na-enye ọ obere uru na omenkà.
19:25 Na-akpọ ha ọnụ, na ndị na-na-na-arụ ọrụ n'otu ụzọ, o kwuru, sị: "Men, ị maara na anyị ego bụ site na nke a craft.
19:26 Na ị na-ahụ na-anụ na nwoke a Paul, site na-eru n'obi, emewo pụọ a oké ìgwè, ọ bụghị naanị site Ephesus, ma site na fọrọ nke nta niile nke Asia, si, 'Ihe ndị a abụghị chi nke e mere site n'aka.'
19:27 N'ihi ya, ọ bụghị nanị na nke a, anyị na-arụ, n'ihe ize ndụ nke a na-akpobata n'ime repudiation, kamakwa ụlọ nsọ nke nnukwu Diana ga-reputed dị ka ihe ọ bụla! Mgbe ahụ ọbụna ya ebube, onye ihe nile nke Asia na ụwa na-efe, ga-amalite-ebibi. "
19:28 Mgbe ọ nụrụ nke a, ha juputara iwe, na ha tikuru, si, "Great bụ Diana nke ndị Efesọs!"
19:29 Na obodo ahụ jupụtara n'ọgba aghara. Na ebe jide Geyọs na Arịstakọs nke Macedonia, enyi nke Paul, ha jikwa ike, ji otu, n'ime ọgbọ egwuregwu.
19:30 Mgbe ahụ, mgbe Pọl chọrọ tinye ndị mmadụ, na-eso ụzọ ekweghị ya.
19:31 Na ụfọdụ ndị ndú si Asia, bụ ndị enyi ya, zigakwara ya, arịọ na ọ bụghị na-ewetara onwe ya na ọgbọ egwuregwu.
19:32 Ma ndị ọzọ nọ na-eti mkpu dị iche iche ihe. N'ihi na nzukọ ahụ nọ n'ọgba aghara, na ọtụtụ amaghị ihe mere ha a na-akpọ ọnụ.
19:33 Ya mere, ha dọkpụụrụ Alexander si n'ebe ìgwè mmadụ, mgbe ndị Juu na-propelling ya na-atụ. na Alexander, gesturing na aka ya maka nkịtị, chọrọ inye ndị nkọwa.
19:34 Ma ozugbo ha ghọtara ya na-a Jew, niile jiri otu olu, maka awa abụọ, na-etiku, "Great bụ Diana nke ndị Efesọs!"
19:35 Na mgbe ode-akwukwọ we mere ìgwè mmadụ, o kwuru, sị: "Ndị ikom nke Ephesus, ugbu a ihe mmadụ bụ n'ebe ahụ, onye amaghị na ọ bụ obodo ndị Efesọs na na-eje ozi nke oké Diana na nke ụmụ Jupiter?
19:36 Ya mere, kemgbe ihe ndị a na-adịghị ike na-megidere, ọ dị mkpa ka ị na-ịdị nwayọọ na-eme ihe ọ bụla ọkụ ọkụ.
19:37 N'ihi na unu emewo ka na-atụ ndị ikom ndị a, onye na-abụghị sacrilegious ma nkwulu megide gị chi nwaanyị.
19:38 Ma ọ bụrụ na Dimitriọs na ndị omenkà, bụ ndị ha na ya nwere bụrụ megide onye ọ bụla, ha nwere ike ikpokota n'ogige, na e nwere ndị achị ógbè. Ka ha ebubo ibe.
19:39 Ma ọ bụrụ na ị ga-ajụ ase banyere ihe ndị ọzọ, nke a nwere ike kpebiri na a nzukọ iwu kwadoro.
19:40 N'ihi na ugbu a anyị bụ ndị na ize ndụ nke ịbụ ndị a mara ikpe nke imegide ọchịchị n'elu taa ihe, ebe ọ bụ na ọ dịghị onye ikpe mara (megide onye anyị na-enwe ike na-egosi) na oriri a. "Mgbe o kwuru nke a, enye asuan esop.
Ọrụ nke Ndịozi 20
20:1 Mgbe ahụ, mgbe oké aghara kwụsịrị, Paul, akpọ na-eso ụzọ ya onwe ya na-agba ume, ha, kwuru ijeoma. O setịpụrụ, ka o wee na-aga n'ime Macedonia.
20:2 Na mgbe ọ na-eje ije site na ebe ndị na ama gbara ha ume na ọtụtụ okwuchukwu, o wee banye Greece.
20:3 Mgbe ọ nọrọ ọnwa atọ n'ebe ahụ, treacheries e zubere megide ya site ndị Juu, dị nnọọ ka ọ bụ banyere iji ụgbọ mmiri n'ime Syria. Na ọ na e dụrụ nke a, ọ laghachi site Macedonia.
20:4 Ugbu a ndị so ya na-Sopater, , nwa Pirọs si Beroea; na kwa Tesalonaịka, Na Aristakọs na Sekundọs; na Gaiọs nke Dabe, na Timoti; na Tikikọs na Trọfimọs si Asia.
20:5 ndị a, mgbe ha gara n'ihu, echere anyị na Troas.
20:6 Ma n'ezie, anyị ji ụgbọ mmiri si na Filipaị, mgbe ụbọchị nke ekoghị eko achịcha, na na ụbọchị ise anyị gara ha na Troas, ebe anyị na-anọ ruo ụbọchị asaa.
20:7 Mgbe ahụ, na mbụ na-izu-ike, mgbe anyị zukọrọ ọnụ inyawa achicha, Paul discoursed na ha, n'obi setịpụrụ echi. Ma ọ ogologo ya ozizi n'ime n'etiti abalị.
20:8 Ugbu a, e nwere ọtụtụ oriọna n'ọnụ ụlọ dị n'elu, ebe anyị na-achịkọta.
20:9 Na a na-eto eto aha ya bụ Yutikọs, ọdụ na window sill, a na-anyịgbu a arọ iro ụra (maka Paul nọ na-ekwusa na ogologo). Mgbe ahụ, ka o wee na-ehi ụra, ọ dara si n'okpukpu nke atọ ụlọ n'ala. Na mgbe e buliri ya elu, ọ nwụrụ anwụ.
20:10 Mgbe Paul ridara ya, o wee bikwasị ya onwe ya n'elu ya na, amakụ ya, kwuru, "Echegbula, mkpụrụ obi ya bụ ka n'ime ya. "
20:11 Ya mere, -agbago, na-agbasa nri, na-eri, na kwurịtara okwu nke ọma na ruo mgbe chi bọchara, mgbe ahụ, o setịpụrụ.
20:12 Ugbu a, ha mere ka nwa okoro na ndụ, na ha nọ karịrị a obere kasiri.
20:13 Mgbe ahụ, anyị rigoro ubom na ụgbọ mmiri ka Assos, bụ ebe anyị nọ na-na Paul. N'ihi na otú ya onwe ya kpebiri, ebe ọ bụ na-eme njem site na ala.
20:14 Na mgbe o sooro anyị n'Asọs, anyị na-ada ya na, na anyị gara Mitylene.
20:15 Na ụgbọ si n'ebe, n'echi, anyị bịarutere abụghị Kiọs. Onye na-esote anyị kwụsị na Samos. Na ndị na-esonụ ụbọchị anyị gara Miletus.
20:16 N'ihi na Pọl ekpebiwo iso ụgbọ mmiri gafere n'Efesọs, nke mere na ọ bụghị ya ga-egbu oge na Asia. N'ihi na ọ nọ mee ọsọ ọsọ nke na, ma ọ bụrụ na ọ bụ ndị na-ekwe omume n'ihi ya, o wee na-edebe ụbọchị Pentikọst na Jerusalem.
20:17 Mgbe ahụ, -ezipụ si Miletus Efesọs, ọ na-akpọ ndị na ukwuu mụrụ na chọọchị.
20:18 Ma mgbe ha bịakwute ya na ndị ọnụ, O wee sị ha: "Unu maara na malite n'ụbọchị mbụ, mgbe m banyere n'ime Asia, M nọnyeere gị, maka dum oge, otú a:
20:19 Onyenwe anyị ozi, na ndị niile ịdị umeala n'obi na n'agbanyeghị na anya mmiri na ọnwụnwa nke dakwasịrị m si treacheries ndị Juu,
20:20 otú m nwere azụ ihe ọ bụla nke di nke uru, otú ọma m ezisara unu, na na m kụziiri unu ihe n'ihu ọha nakwa n'oge nile nke ụlọ,
20:21 -agba akaebe ma ndị Juu ma ndị Jentaịl banyere nchegharị n'ebe Chineke nọ na okwukwe n'Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
20:22 Ma ugbu a,, le, a na-ụgwọ na mmụọ, M ga-Jerusalem, ma ọ maghị ihe ga-eme m n'ebe ahụ,
20:23 ma e wezụga na nke Mmụọ Nsọ, ofụri obodo ọ bụla,, ka dọrọ aka ná ntị m, -asị na ígwè na mkpagbu na-echere m na Jerusalem.
20:24 Ma m na-atụ ụjọ nke ọ bụla n'ime ihe ndị a. Mụ onwe m amaghịkwa tụlee ndụ m na-ọzọ dị oké ọnụ ahịa n'ihi na ọ bụ m, bụrụhaala na n'ụzọ ụfọdụ m nwere ike mezue m n'ezie nakwa na nke ije-ozi nke Okwu, nke m natara n'aka Onyenwe anyị Jizọs, iji gbaa akaebe nye ozi oma nke amara Chineke.
20:25 Ma ugbu a,, le, Ama m na unu ga-aba na-ahu irum, niile unu niile bụ ndị m gara, ekwusa alaeze Chineke.
20:26 N'ihi nke a, M na-akpọ gị dị ka ndị akaebe n'ụbọchị a: na mụ onwe m dị ọcha n'ebe ọbara nile.
20:27 N'ihi na wezuga onwe na ọ dịghị ihe ọzọ ikwusa ọ bụla ndụmọdụ Chineke gị.
20:28 Na-elekọta onwe unu na nke dum ìgwè atụrụ, n'elu nke Muo Nso guzo ị dị ka Bishọp nke ịchị Church nke Chineke, nke o zụrụ ọbara ya.
20:29 Ama m na mgbe m lara anụ ọhịa wolf agụụ ga-aba n'etiti unu, bụghị ìgwè ewu na ìgwè ewu na atụrụ.
20:30 Na n'etiti unu, ndị ga-ebili, ekwu okwu ịgbakụta Chineke azụ iji arata eso ụzọ ya mgbe ha.
20:31 N'ihi nke a, -amụ anya, retaining na ebe nchekwa na ofụri afọ atọ m akwụsịghị, abalị na ehihie, anya mmiri na-, dụrụ onye ọ bụla n'ime unu.
20:32 Ma ugbu a,, M enyefe unu n'aka Chineke na aka okwu amara. O nwere ikike ime ka e nwee, na-enye ihe nketa ndị niile e doro nsọ.
20:33 M nwere anyaukwu n'ebe ọlaọcha na ọlaedo ma, ma ọ bụ uwe ya dị,
20:34 dị ka unu onwe unu maara. N'ihi na ihe ahụ dị mkpa site m na ndị so m, aka m ndị a nyere.
20:35 M kpughere unu ihe nile, n'ihi na site arụ n'ụzọ dị otú a, ọ dị mkpa iji na-akwado ndị na-adịghị ike na icheta okwu Onyenwe anyị Jizọs, otú ọ sịrị, 'Ọ bụ ndị a gọziri agọzi inye karịa na-enweta.' "
20:36 Na mgbe o kwusịrị ihe ndị a, gburu ikpere n'ala, o kpere ekpere na ha nile.
20:37 Mgbe ahụ a oké ákwá mere n'etiti ha nile. Na, dara n'elu n'olu Paul, ha susuo ya ọnụ,
20:38 a na-mwute na nke ka nke n'ihi okwu nke o kwuru, na ha agaghị ịhụ ihu ya ọzọ. Ha we me ya n'ụgbọ mmiri.
Ọrụ nke Ndịozi 21
21:1 Na mgbe ihe ndị a mere, ebe ekweghiekwe kewapụrụ ya n'ebe ha, anyị ụgbọ mmiri a kpọmkwem N'ezie, rutere Cos, na na na-esonụ ụbọchị na Rhodes, na si n'ebe Patara.
21:2 Na mgbe anyị hụrụ otu ụgbọ mmiri gafee Finishia, arịgo n'ụgbọ, anyị so.
21:3 Mgbe ahụ, mgbe anyị hụrụ Cyprus, edebe ya ka ekpe, anyị ji ụgbọ mmiri na-na Syria, na anyị rutere Taia. N'ihi na ụgbọ mmiri na-aga butuo ya ibu e.
21:4 Mgbe ahụ, ọ chọpụtara na ndị na-eso ụzọ, anyị ndidu e ruo ụbọchị asaa. Na ha na-asị Paul, site na Mọ Nsọ, ka ọ ghara irigoro Jerusalem.
21:5 Ma mgbe ụbọchị e dechara, mwube, anyị wee na-; ma ha niile so anyị na ndị nwunye ha na ụmụ, ruo mgbe anyị nọ na mpụga nke obodo. Na anyị na-gburu ikpere n'ala, na n'ikpere mmiri na-ekpe ekpere.
21:6 Ma mgbe anyị kwuru ijeoma ibe, anyị rigoro ubom. Na ha laghachiri ha onwe ha.
21:7 Ma n'ezie, ọ dechara njem anyị ji ụgbọ mmiri si na Taia, anyị rịdata na Ptolemais. Na unu na-ekele ụmụnna, anyị ndidu na ha maka otu ụbọchị.
21:8 Mgbe ahụ, mgbe mwube si na-esote ụbọchị, anyị rutere Caesarea. Na n'elu na-abanye n'ụlọ Filip onye na-ezisa ozi ọma, onye bụ otu n'ime asaa, anyị nọrọ na ya.
21:9 Ugbu a nwoke a nwere ụmụ anọ, amaghị nwoke, ndị na-ebu amụma.
21:10 Na mgbe anyị nọ na-egbu oge ruo ụbọchị ụfọdụ, otu onye amụma si na Judia, aha ya bụ Agabọs, rutere.
21:11 o, mgbe ọ bịara anyị, were Pọl belt, na isọ-nsọ-ya ụkwụ na aka, o kwuru, sị: "Otú a ka Mmụọ Nsọ: The nwoke belt nke a bụ, ndị Juu ga-eke agbụ n'ụzọ dị otú a na Jerusalem. Na ha ga-enyefekwa ya n'aka ndị mba ọzọ. "
21:12 Ma mgbe anyị nụrụ nke a, ma anyị ma ndị bụ ndị si ebe ahụ na-arịọ ya ka ọ ghara ịga Jeruselem.
21:13 Mgbe ahụ, Pọl gwara ha, sị: "Gịnị ka ị ga-arụzu site akwa ákwá ma na-emekpa m n'obi? N'ihi na m na-akwadebe, ọ bụghị nanị na-agbụ, kamakwa ịnwụ na Jerusalem, n'ihi aha Onyenwe anyị Jizọs. "
21:14 Ma ebe ọ bụ na anyị anaghị enwe ike ime ka ya, anyị jụụ, si: "Ka uche Jehova mee."
21:15 Mgbe ahụ, mgbe ụbọchị ndị ahụ, enwe mere preparations, anyị rịgooro Jerusalem.
21:16 Ugbu a, ụfọdụ ndị na-eso ụzọ si na Sesaria sokwa anyị, na-eweta na ha a na-Saịprọs aha ya bụ Mnason, a nnọọ agadi-eso ụzọ, onye ọbịa anyị ga-.
21:17 Na mgbe anyị rutere Jeruselem, ụmụnna natara anyị ji obi.
21:18 Mgbe ahụ, n'echi, Paul banyere na anyị James. Na ndị okenye niile zukọrọ.
21:19 Na mgbe o kelere ha, ọ kọwara onye ọ bụla ihe na Chineke mezuru n'etiti mba ọzọ site n'ozi ya.
21:20 na ha, nụrụ ya, uku Chineke, si ya: "Ị ghọtara, nwa-nne-, ọtụtụ puku e nwere n'etiti ndị Juu bụ ndị kweere, ha niile na-anụ ọkụ n'obi maka iwu.
21:21 Ugbu a, ha nụrụ banyere gị, na unu na-akụziri ndị Juu bụ ndị nọ n'etiti ndị mba ọzọ ka ịdọrọ si Moses, na-agwa ha ka ha ghara úgwù ụmụ ha, ma ọ bụ mee ihe dị ka omenala.
21:22 Gịnị bụ ọzọ? The ìgwè kwesịrị ịdị na-kpọkọrọ. N'ihi na ha ga-anụ na ị bịarutere.
21:23 Ya mere, eme ihe a na anyị na-arịọ unu: Anyị nwere ndị ikom anọ, ndị nọ n'okpuru a nkwa.
21:24 Were ndị a na-edo nsọ onwe gị na ha, na-achọ ka ha na-akpụ ha isi. Ma mgbe ahụ onye ọ bụla ga-amara na ihe ha nụrụ banyere gị bụ ụgha, ma na gị onwe gị na-eje ije na-edebe ya na iwu.
21:25 Ma, banyere ndị Jentaịl bụ ndị na-kweere, anyị dere a ikpe na ha ga na-edebe onwe ha site na ihe e immolated arụsị, na ọbara, na site n'ihe niile e adịghị ekwe, na ịkwa iko. "
21:26 mgbe ahụ Paul, na-ewere ndị na-esote ụbọchị, e ọcha na ha, na ọ banyere n'ụlọ nsọ, ezikwa usoro nke ụbọchị nke ọcha, ruo mgbe otu inata-iru ga-awa na nnọchite nke onye ọ bụla n'ime ha.
21:27 Ma mgbe ụbọchị asaa ahụ na-eru ẹkụre, ndị Juu, bụ ndị si na Asia, mgbe ha hụrụ ya n'ụlọ nsọ, kpaliri mmadụ niile, na ha tọrọ ya aka, na-eti mkpu:
21:28 "Ndị ikom nke Israel, Enyemaka! Nke a bụ onye ozizi, onye ọ bụla, n'ebe nile, megide ndị mmadụ na iwu na ebe a. Ọzọkwa, ọ kpọbatara ọbụna ndị Jentaịl n'ụlọ nsọ, na o mebiri iwu ebe nsọ a. "
21:29 (N'ihi na ha hụrụ Trọfimọs, ihe Efesọs, n'ime obodo ya, na ha chere na Pọl akpọbatawo ya n'ụlọ nsọ ahụ.)
21:30 Na obodo ahụ dum nọ na-kpaliri. Ma ọ mere na ndị mmadụ gbara ọnụ. Na apprehending Paul, ha dọkpụụrụ ya na mpụga nke temple. Ozugbo ahụ, ọnụ ụzọ nọ na-emechi.
21:31 Mgbe ahụ, ka ha nọ na-achọ igbu ya, a kọọrọ ọchịagha nke ìgwè ndị agha: "All Jerusalem bụ ná mgbagwoju anya."
21:32 Ya mere, ozugbo ewere agha na centurions, ọ gbalara ala nye ha. Na mgbe ha hụrụ ọchịagha na ndị agha, ha kwụsịrị iti Pọl.
21:33 Mgbe ahụ, ọchịagha ahụ, -eru nso, na-achọ ijide ya ma nye iwu ka o-agbụ na abụọ n'agbụ. Ọ na-ajụkwa onye ọ bụ na ihe o mere.
21:34 Mgbe ahụ, ha na-etiku ihe dị iche iche n'ime ìgwè mmadụ. Ma ebe ọ bụ na ọ pụghị ịghọta ihe ọ bụla n'ụzọ doro anya n'ihi na nke mkpọtụ, o nyere iwu ya na-ada n'ime ebe e wusiri ike.
21:35 Na mgbe o rutere steepụ, ya mere na ọ nọ na-ebu elu na ndị agha, n'ihi iyi egwu nke ime ihe ike, nke ndị mmadụ.
21:36 N'ihi na ọtutu ndi Israel na-esonụ na-eti mkpu,, "Kpọrọ ya pụọ!"
21:37 Na dị ka Pọl nọ na-amalite na-ada n'ime ebe e wusiri ike, ọ sịrị ọchịagha, "Ọ bụ ime ihe m na-ekwu ihe na-ị?"O wee sị, "Unu maara Greek?
21:38 Ya mere,, bụ na ị bụghị na Ijipt onye tupu ụbọchị ndị a kpaliri a nnupụisi na ada n'ime desert puku mmadụ anọ igbu ha?"
21:39 Ma Pọl sịrị ya: "Abụ m otu nwoke, n'ezie a Jew, Tasọs na Silishia, a amaala nke a maara nke ọma obodo. N'ihi ya, m ịrịọ ị, ka m gwa ndị a okwu. "
21:40 Na mgbe o nyere ya ikike, Paul, guzo na steepụ, feere na aka ya na ndị mmadụ. Na mgbe a oké nkịtị mere, ọ gwara ha na asụsụ Hibru, si:
Ọrụ nke Ndịozi 22
22:1 "Noble ụmụnna nwoke na nna, na-ege ntị nkọwa na m ugbu a na-enye gị ya. "
22:2 Mgbe ha nụrụ ya na-ekwu okwu ka ha na asụsụ Hibru, ha nyere a ukwuu nkịtị.
22:3 O wee sị: "Abụ m otu nwoke onye Juu, mụrụ na Tasọs nime Silisia, ma-akpọlite ​​n'obodo a n'akụkụ ụkwụ Gamaliel, kụziiri dị ka eziokwu nke iwu nke nna, anụ ọkụ n'obi maka iwu, dị nnọọ ka unu niile na-na-na a ụbọchị.
22:4 M na-akpagbu a Way, rue ọnwu, nkịtị na-anapụta n'ime mkpọrọ ma ndị ikom ma ndị inyom,
22:5 dị nnọọ ka nnukwu onye nchụàjà na ndị niile na-ukwuu mụrụ bear m àmà. Ebe natara akwụkwọ ozi site n'aka ha ka ha na ụmụnna, M bulie ije Damascus, ka m wee na-edu ha agbụ si n'ebe Jerusalem, ka ha wee na-ata ya ahụhụ.
22:6 Ma ọ dabara na, ka m na-ejegharị ejegharị na-abịaru nso Damascus na ehihie, mberede si heaven a oké ìhè nwuo gburugburu m.
22:7 Na-atapụsị n'ala, A nuru m olu na-asị m, 'Sọl, Saul, gịnị mere i ji na-akpagbu m?'
22:8 Mụ, 'Onye ka ị bụ, Jehova?'O wee sị m, 'Abụ m Jizọs onye Nazaret, onye ị na-akpagbu. '
22:9 Na ndị nọ na m, n'ezie, hụrụ ìhè, ma ha anughi olu Onye ahu nāgwam okwu.
22:10 M wee sị, 'Kedu ihe m kwesịrị ịme, Jehova?'Mgbe ahụ, Jehova wee sị m: 'Bilienụ, na-aga Damaskọs. na e, ị ga-gwara ihe niile ị na-aghaghị ime. '
22:11 Ma ebe ọ bụ na enweghị m ike ịhụ, n'ihi na nke ìhè na ìhè na, M na-ada site n'aka site enyi m, na m gara Damaskọs.
22:12 Mgbe ahụ a na-Ananias, a nwoke dị na iwu, enwe àmà nke ndị Juu niile bi n'ebe ahụ,
22:13 na-eru nso ka m na ya guzo nso ebe, wee sị m, 'Nwanna Saul, ịhụ!'Ndien ke hour, M lere anya n'elu ya.
22:14 Ma ọ sịrị: 'Chineke nke nna nna anyị hà ka preordained ị, nke mere na ị ga-abịa mara uche ya na ga-ahụ nnọọ One, na-anụ olu si n'ọnu-ya.
22:15 N'ihi na unu ga-àmà ya nye mmadụ niile banyere ihe ndị ahụ nke na ị hụrụ na ihe ọ nụrụ.
22:16 Ma ugbu a,, ihe mere i ji egbu oge? Bilie, na baptism, na asapụ mmehie gị, site n'ịkpọku aha ya. '
22:17 Mgbe ahụ, ọ mere ka, mgbe m laghachiri Jerusalem na-ekpe ekpere n'ụlọ nsọ, a echiche stupor wee m,
22:18 na m hụrụ ya na-asị m: 'Mee ọsọ ọsọ! Pụọ ngwa ngwa si Jerusalem! N'ihi na ha ga-anabata gị àmà banyere m. '
22:19 M wee sị: 'Onyenwe anyị, na ha maara na m na-eti na gbaa n'ụlọ mkpọrọ, nile ọ bụla synagogue, ndị kwere na gị.
22:20 Na mgbe ọbara àmà gị Stephen wụsara, M guzo nso na e-ekwenye, na m na-elekọta uwe ndị gbuo ya. '
22:21 O wee sị m, 'Gaa. N'ihi na m na-eziga gị n'ebe dị anya mba. ' "
22:22 Ugbu a, ha nọ na-ege ya, ruo mgbe okwu a, na mgbe ahụ, ha we welie olu-ha, si: "Were ụdị n'ebe ụwa! N'ihi na ọ bụghị kwesịrị ya na-ebi ndụ!"
22:23 Na mgbe ha na-eti mkpu, na-amapụtakwa onwe uwe ha, na nēfe ájá n'ime ikuku,
22:24 ọchịagha ahụ nyere ya iwu ka a kpọbata ndị e wusiri ike, na a ga-piasiri na im, iji chọpụta ihe mere na ha na-eti mkpu, n'ụzọ dị otú a megide ya.
22:25 Ma mgbe ha kee ya agbụ, Pọl gwara onyeisi ndị agha bụ onye e guzo ya nso,, "Iwu ọ kwadoro ka unu pịa onye bụ onye a Roman na bụghị e ikpe?"
22:26 Mgbe ọ nụrụ nke a, onyeisi ndị agha gara ọchịagha na kọọrọ ya ya, si: "Gịnị ka i bu n'obi na-eme? N'ihi na nwoke a bụ nwa amaala Rom. "
22:27 Na ọchịagha, -eru nso, sị ya: "Gwa m. Ị a Roman?"O wee sị, "Ee."
22:28 Na ọchịagha zara, "M nwetara a ụmụ amaala na-efu." Pọl kwuru, "Ma a mụrụ m ka ya."
22:29 Ya mere, ndị na-aga okpotụhọrede ya, ozugbo hapụ ya. The ọchịagha bụ ihe yiri egwu, mgbe ọ chọpụtara na ọ bụ nwa amaala Rom, n'ihi na o kee ya agbụ.
22:30 Ma n'echi, chọrọ ịchọpụta ọzọ ịdị uchu ihe kpatara ya bụ na ọ na-ebo ebubo ndị Juu, ọ tọhapụrụ ya, o nyekwara iwu ndị nchụàjà na ikpokota, na dum kansul. Na, amị Paul, ọ guzoro n'etiti ha.
Ọrụ nke Ndịozi 23
23:1 mgbe ahụ Paul, ele anya ọma na kansul, kwuru, "Noble ụmụnna, M kwuru na niile ezi akọ na uche n'iru Chineke, ọbụna a ugbu a. "
23:2 Na nnukwu onye nchụàjà, Ananias, gwara ndị bụ ndị guzo nso ka ha tie ya ihe n'ọnụ.
23:3 Pọl wee sị ya: "Chineke ga-eti gị, ị mgbidi e tere nzụ! N'ihi na ị ga-anọdụ ala na-ekpe m ikpe dị ka iwu, mgbe ole, megidere iwu, ị ịtụ ka e tie m?"
23:4 Na ndị na-guzo nso kwuru, "Ị na-ekwu okwu ọjọọ banyere nnukwu onye nchụàjà nke Chineke?"
23:5 Ma Pọl siri: "Amaghị m, ụmụnna, na ọ bụ nnukwu onye nchụàjà. N'ihi na e dere: 'Ị ga-adịghị ekwu okwu ọjọọ banyere onye ndú nke ndị gị.' "
23:6 ugbu a Paul, ebe ọ maara na otu ìgwè ndị Sadusii na ndị ọzọ na ndị Farisii, tie mkpu, sị na otu kansul: "Noble ụmụnna, Abụ m onye Farisii, nwa Farisii! Ọ bụ n'ihi olileanya na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na-ekpe m ikpe. "
23:7 Na mgbe o kwuru nke a, esemokwu mere n'etiti ndị Farisii na ndị Sadusii. Na iba-uba e kewara.
23:8 N'ihi na ndị Sadusii na-ekwu na e nweghị mbilite n'ọnwụ, ọ dịghịkwa mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị mmụọ. Ma ndị Farisii ekwupụta ma ndị a.
23:9 Mgbe ahụ, e mere oké ahụ tiri mkpu. Na ụfọdụ n'ime ndị Farisii, ebili, na-alụ ọgụ, si: "Anyị ahụghị ihe ọjọọ dị nwoke a. Gịnị ma ọ bụrụ na a spirit gwara ya, ma ọ bụ mmụọ ozi?"
23:10 Na ebe ọ bụ na a oké nkewa e mere, ọchịagha, -atụ egwu na Paul nwere ike ekewasị ha, nyere iwu ka ndị agha na-arịda na ịchọ ya n'etiti ha, na ime ka ya n'ime ebe e wusiri ike.
23:11 Mgbe ahụ, on n'abalị na-eso, Jehova guzo ya nso, si: "Na-mgbe nile. N'ihi na dị nnọọ ka unu gbaa akaebe banyere m na Jeruselem, otú a kwa ka ọ dị mkpa ka ị na-agba akaebe na na Rom. "
23:12 Na mgbe ìhè rutere, ụfọdụ ndị Juu wee zukọta ma jikọta onwe ha na-iyi, na-ekwu na ha agaghị eri ihe ma ọ bụ na-aṅụ ruo mgbe ha gburu Pọl.
23:13 Ugbu a, e nwere ihe karịrị ndị ikom iri anọ bụ ndị e iyi ọnụ.
23:14 Na ha gakwuuru ndị isi nke ndị nchụàjà, na ndi-okenye, ha we si: "Anyị aṅụwo iyi na anyị site iyi, nke mere na anyị ga-atọ ọ bụla, ruo mgbe anyị gburu Pọl.
23:15 Ya mere, na kansul, ị kwesịrị ị na-enye ugbu a, mara ọchịagha, ka o wee mee ka unu ya, dị ka ma ọ bụrụ na unu bu n'uche ịchọpụta ihe ọzọ banyere ya. Ma tupu ọ na-abịakwute, anyị mere preparations ka gbuo ya. "
23:16 Ma mgbe Pọl nwa nwanne nụrụ nke a, banyere ha aghụghọ, O wee banye ebe e wusiri ike, o kọọrọ ya Pọl.
23:17 na Paul, akpọ ya otu n'ime centurions, kwuru: "Duru nwa okorobịa a ka ọchịagha. N'ihi na o nwere ihe ọ na-agwa ya. "
23:18 ma n'ezie,, o wee kpọrọ ya ma duru ya gakwuru ọchịagha, o wee sị, "Paul, onye mkpọrọ, gwara m ka m na-edu a gị nwa okorobịa, ebe o nwere ihe ọ ga-agwa unu. "
23:19 Mgbe ahụ, ọchịagha ahụ, ewere ya okwu n'aka, wezuga Onwe-ya na ha, na ọ jụrụ ya: "Gịnị ka ọ bụ na ị ga-agwa m?"
23:20 O wee sị: "Ndị Juu zutere ịjụ gị na-ewetara Paul echi kansul, dị ka ma ọ bụrụ na ha bu n'obi na-ajụ ya banyere ihe ọzọ.
23:21 ma n'ezie, ị kwesịrị ị na-ekweghị ka ha, n'ihi na ha ga-gara zoo chebiri ya na ihe karịrị ndị ikom iri anọ n'ime ha, ndị jikọta onwe ha site na iyi agaghị eri, ma ọ na-aṅụ, ruo mgbe ha nwere gbuo ya. Ha na-now kwadebere, na-enwe olileanya maka bu ihe si n'ọnu nke gị. "
23:22 Ma mgbe ahụ, ọchịagha ahụ asuan nwa okorobịa, ịkụziri ya ka ọ ghara ịgwa onye ọ bụla na ya mere mara ya ihe ndị a.
23:23 Mgbe ahụ, ọ kpọrọ mmadụ abụọ centurions, O wee sị ha: "Kwadebe narị ndị agha abụọ, nke mere na ha nwere ike na-aga dị ka Caesarea, na iri asaa na ndi-inyinya, na abụọ na narị abụọ spearmen, n'ihi na atọ hour nke abali.
23:24 Ma kwadebe anu ụtarị Paul, nke mere na ha nwere ike na-edu ya n'enweghị Felix, gọvanọ. "
23:25 Maka na ụjọ, ghara ikekwe ndị Juu wee jide ya ma gbuo ya, na na e mesịa ọ ga-boro ebubo ụgha, dị ka ma ọ bụrụ na o kwetara ihe a iri-ngo. O wee dee akwụkwọ ozi nwere ndị na-esonụ:
23:26 "Klọdiọs Laịsias, kasị magburu onwe gọvanọ, Felix: ekele.
23:27 nwoke a, enwe e achọ ijide ndị Juu na ịbụ ihe ga-egbu ha, m napụtara, bogbuo ha na-agha, ebe m chọpụtara na ọ bụ a Roman.
23:28 Na chọrọ ịmata ihe mere na ha jụrụ ya, M wee kpọtara ya n'ime ha kansul.
23:29 Na m chọpụtara e boro ya ebubo banyere okwu ndị metụtara Iwu ha. Ma n'ezie, ọ dịghị ihe kwesịrị ọnwụ ma ọ bụ tụọ ha mkpọrọ bụ n'ime ebubo.
23:30 Ma mgbe m na e nyere ozi ọma nke nēru nbì, nke ha doziri megide ya, M zitere ya ka ị na, ịgwa-ebo ya ebubo na-, nke mere na ha nwere ike rịọ ha ebubo n'iru unu. Farewell. "
23:31 Mere ndi-agha, ewere Pọl dị ka iwu e nyere ha, me ya n'abalị ka Antipatris.
23:32 Na-esote ụbọchị, eziga ndi-inyinya na-aga na ya, ha we laghachi na ebe ewusiri ike.
23:33 Ma mgbe ha rutere Caesarea na napụtara ndị gọvanọ akwụkwọ ozi ahụ, ha, nyefeekwa Pọl n'ihu ya.
23:34 Na mgbe ọ na-agụ ya ma na rịọrọ nke ógbè o si, ifiọkde na o si Silishia, o kwuru, sị:
23:35 "M ga-anụ na ị na, mgbe ebo gị ebubo bịarutere. "O nyere iwu ka a kpọchie ya na Pritoriọm nke Herod.
Ọrụ nke Ndịozi 24
24:1 Mgbe ahụ, mgbe ụbọchị ise, nnukwu onye nchụàjà Ananias gbadata na ndị okenye ụfọdụ na a na-Tetọlọs, a ọkà okwu. Ha wee gọvanọ megide Paul.
24:2 Na ọ kpọrọ Paul, Tetọlọs malitere ibo ya ebubo, si: "Ọtụtụ ndị magburu onwe Felix, ebe anyị nwere ihe udo site ị, na ọtụtụ ihe nwere ike gbazie gị nduzi,
24:3 anyị na-ekweta na nke a, mgbe niile na n'ebe nile, na omume nke ekele maka ihe niile.
24:4 Ma ka m'we ghara ikwu okwu na ukwuu a ogologo, Ana m arịọ gị, gị clemency, ige anyị ntị ná mkpirikpi.
24:5 Anyị chọpụtara na nwoke a na-pestilent, ka akpali imegide ọchịchị ndị Juu niile na ụwa nile, ma na-na-ede akwụkwọ nke imegide ọchịchị nke òtù ndị Nazaret.
24:6 Ọ ọbụna e agbali-emerụ ụlọ nsọ. Na ọ na-achọ ijide ya, anyị chọrọ ka ọ ga-ekpe ikpe dị ka anyị iwu.
24:7 ma Laịsias, ọchịagha, bogbuo anyị na-akwa ime ihe ike, naara ya n'ebe anyị aka,
24:8 iwu-ebo ya ebubo na-abịa ị. site ha, gị onwe gị ga-enwe ike, site na-ekpe ikpe ihe a niile, ịghọta na ihe mere na anyị na-bo ya ebubo. "
24:9 Ma mgbe ahụ, ndị Juu interjected, na-ekwu na ihe ndị a bụ.
24:10 Mgbe ahụ, ebe gọvanọ ama feere ya na-ekwu okwu, Paul zara: "Ịmara na ị na ndidi ikpe n'ebe mba a ruo ọtụtụ afọ, M ga-enye nkọwa nke onwe m na-eme ihe n'eziokwu mkpụrụ obi.
24:11 N'ihi na, dị ka i nwere ike na-aghọta, ọ na kemgbe iri na abụọ ụbọchị kemgbe M wee ruo ofufe na Jeruselem.
24:12 Na ha na-ahụghị m n'ụlọ nsọ na-arụ ụka na onye ọ bụla, ma ọ bụ na-eme ka a rally nke ndị mmadụ: abughi n'ụlọ nzukọ, ma ọ bụ obodo.
24:13 Na ha na-adịghị ike na-egosi gị ihe banyere nke ha ugbu a ebubo m.
24:14 Ma, m na-ekwupụtara gị ihe a, na dị ka na otu, nke ha na-akpọ a heresy, otú m na-eje ozi m Chineke na Nna, Ikwere niile e dere na Iwu ahụ na ihe ndị amụma kụziri,
24:15 enwe a na Chineke, nke ndị a ndị ọzọ ha na-atụ anya, na a ga-a ga-eme n'ọdịnihu mbilite n'ọnwụ nke ndị ezi omume na-ezighị ezi e.
24:16 Na a, Mụ onwe m mgbe niile na-agbalịsi ike nwere akọ na uche a na-adịghị ná ịda iwu ọ bụla n'ebe Chineke nọ na n'ebe mmadụ nọ.
24:17 Mgbe ahụ, mgbe ọtụtụ afọ, M gara mba m, eweta ebere na àjà na nkwa,
24:18 site na nke m nwetara ọcha na temple: maọbụ na a ìgwè mmadụ, ma ọ bụ na a ọgba aghara.
24:19 Ma ụfọdụ ndị Juu si Asia bụ ndị kwesịrị n'ihu gị ebubo m, ma ọ bụrụ na ha nwere ihe ọ bula megide m.
24:20 Ma ọ bụ ka ndị a ebe a na-ekwu ma ọ bụrụ na ha hụrụ m ọ bụla ajọ omume, mgbe ha guzo n'ihu kansul.
24:21 N'ihi na mgbe guzo n'etiti ha, M kwuru okwu nanị banyere nke a otu ihe: banyere mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ banyere ihe a na-ekpe m ikpe taa site gị. "
24:22 mgbe ahụ Felix, mgbe ọ chọpụta ihe ọmụma dị ukwuu banyere nke a Way, nēdebe ha na-eche, site na-ekwu, "Mgbe Laịsias bụ ọchịagha eruwo, M ga-enye gị a na-anụ. "
24:23 Na o nyere iwu a, onyeisi ndị agha na-eche ya, ma na-ezu ike, na ghara gbochie ọ bụla nke ya onwe ya site na-ejere ya ozi.
24:24 Mgbe ahụ, mgbe ụbọchị ụfọdụ gasịrị, Felix, bịarutere na Drusila nwunye ya bụ onye a Jew, kpọ Pọl na gere ya ntị banyere okwukwe na Kraịst Jizọs.
24:25 Mgbe ọ discoursed banyere ikpe ziri ezi na akpata, na banyere ọdịnihu ikpe, Felix ama jijiji, na o mere: "Maka ugbu a, -aga, ma nọgide na-n'okpuru nche. Mgbe ahụ, na ihe kwesịrị ekwesị oge, M ga-eziga kpọọ gị. "
24:26 Ọ na-enwe olileanya na ego nwere ike e nyere ya site Paul, n'ihi nke a, ọ ugboro ugboro kpọọ ya, gwa ya.
24:27 Mgbe ahụ, mgbe afọ abụọ gafere, Felix nọchikwara site Portius Festus. Ma ebe ọ bụ Felix chọrọ igosi ndị meere ndị Juu amara, ọ hapụrụ Pọl n'azụ dị ka onye mkpọrọ.
Ọrụ nke Ndịozi 25
25:1 Ya mere, mgbe Festọs rutere n'ógbè, mgbe ụbọchị atọ gasịrị, ọ rịgooro Jerusalem si na Sesaria.
25:2 Na ndị ndú nke ndị nchụàjà, na ndị mbụ n'etiti ndị Juu, gakwuuru ya megide Paul. Na ha na-arịọ ya,
25:3 na-arịọ maka amara imegide ya, nke mere na ọ ga-ịtụ ya na-edu na Jerusalem, ebe ha na-ịnọgide na-enwe ihe ndị zoro iji gbuo ya n'okporo ụzọ.
25:4 Ma Festọs zara na Pọl na-nọ na Caesarea, na na ya ga-adịghị anya na-aga ebe.
25:5 "Ya mere,,"Ka o kwuru, "Ka ndị n'etiti unu, onye na-enwe ike, ịgbada n'otu oge, na ọ bụrụ na e ọ bụla ikpe na nwoke, ha nwere ike bo ya ebubo. "
25:6 Mgbe ahụ, ọ nọrọ n'etiti ha adịghị karịa asatọ ma ọ bụ iri ụbọchị, rịdata Sesaria. Na na na-esote ụbọchị, ya nānọdu oche ikpe, na o nyere iwu Paul na-edu na.
25:7 Na mgbe ọ na e mewo, ndị Juu na Jerusalem ridata we guzo ya buruburu, atụba ọtụtụ oké njọ ebubo, ọ dịghị nke ha na-enwe ike iji gosi na.
25:8 Paul nyere a na-azara ọnụ: "Ma megide iwu nke ndị Juu, ma ọ bụ megide ụlọ nsọ, ma ọ bụ megide Siza, nwere m n'ọnyà ọ bụla okwu. "
25:9 ma Festọs, chọrọ egosi ukwuu meere ndị Juu amara, zara Pọl, sị: "Ị dị njikere agbago Jeruselem na-ekpe ikpe ka e nwere banyere ihe ndị a tupu m?"
25:10 Ma Pọl sịrị: "M na-eguzo Sisa ikpe, nke bụ ebe m kwesịrị ịdị na-ekpe ikpe. M mere ọ dịghị nsogbu ndị Juu, dị ka ị maara nke ọma.
25:11 N'ihi na ọ bụrụ m imerụ ha, ma ọ bụ ọ bụrụ na m mere ihe ọ bụla kwesịrị ọnwụ, Adịghị m jụrụ na-anwụ anwụ. Ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe na ihe ndị a banyere nke ha ebubo m, ọ dịghị onye nwere ike ịnapụta m ha. Ana m akpọku Siza. "
25:12 mgbe Festọs, kwurịtara okwu kansul, zara: "Ị kpọkuru Siza, Siza ka ị ga-aga. "
25:13 Na mgbe ụbọchị ụfọdụ gafere, eze Agrippa na Banaisi rịdata Sesaria, na-ekele ndị Festus.
25:14 Na ebe ọ bụ na ha wee biri n'ebe ahụ ruo ọtụtụ ụbọchị, Festus gwa eze banyere Paul, si: "Otu nwoke hapụrụ dị ka onye mkpọrọ Filiks.
25:15 Mgbe m bụ na Jerusalem, ndi isi nke ndị nchụàjà na ndị okenye ndị Juu wee ruo m banyere ya, na-arịọ maka ikpe megide ya.
25:16 M zara ha na ọ bụghị omenala nke ndị Rom na-akatọ onye ọ bụla, tupu onye ahụ nke na-ebo ebubo e zutere ebo ya ebubo na natara ohere nke ịgọpụrụ onwe ya, ka e wee kpochapụ onwe ya nke ebubo.
25:17 Ya mere, Ha we biarue ebe a, enweghị ihe ọ bụla igbu oge, n'echi, nọ ọdụ n'oche ikpe, M nyere iwu ka onye na-ada.
25:18 Ma mgbe na-ebo ebubo guzoro n'etiti elu, ha ahụ abụghị ebubo ọ bụla banyere ya site na nke m na-enyo ihe ọjọ.
25:19 Kama, ha we me ya arụmụka banyere ha nkwenkwe ụgha na banyere otu Jesus, bụ ndị nwụrụ, ma Onye Pọl nāsi na Ọ di ndu.
25:20 Ya mere, ịnọ na-obi abụọ banyere nke a ụdị ajụjụ, M jụrụ ya ma ọ bụrụ na Ọ dị njikere ịga Jeruselem wee na-ekpe ikpe n'ebe banyere ihe ndị a.
25:21 Ma ebe ọ bụ na Pọl nọ na-amasị ka edebe ya nye a mkpebi tupu Augustus, M nyere iwu ka a kpọchie ya, ruo mgbe m nwere ike-ezigara ya Siza. "
25:22 Agripa we Festọs: "Mụ onwe m na-achọ ịnụ ihe nwoke ahụ." "Echi,"Ka o kwuru, "Ị ga-anụ ya."
25:23 Na na na-esote ụbọchị, mgbe Agrịpa na Benis bịarutere na-akwa ime oké ngosi na banye n'ụlọ mgbakọ na tribunes na ndị isi ndị obodo, A kpọbatara Pọl, dị ka iwu Festus.
25:24 Festọs wee sị: "Eze Agrịpa, na ndi nile nọ na anyị, ị na-ahụ nwoke a, banyere onye niile ìgwè ndị Juu nsogbu m na Jerusalem, ekpere ma na-ekwusi na ọ gaghị ekwe ka ndu ọzọ.
25:25 N'ezie, M chọpụtara ihe ọ bụla weputara megide ya na bụ kwesịrị ọnwụ. Ma ebe ọ bụ na ya onwe ya rịọrọ Augustus, ọ bụ ikpe m iziga ya.
25:26 Ma m na-kpebisiri ike na ihe na-edetara onye eze ukwu banyere ya. N'ihi nke a, M wee kpọtara ya n'ihu gị niile, karịsịa n'ihu gị, O eze Agrippa, ka ọ were, ozugbo onye ase ka mere, M wee nwee ihe dee.
25:27 N'ihi na o yiri m ihe ezi uche na-eziga a mkpọrọ ma gharakwa na-egosi ebubo megide ya. "
Ọrụ nke Ndịozi 26
26:1 Ma n'ezie, Agripa we si Pọl, "Ọ na-kwere ka ị na-ekwu okwu n'ihi na gị onwe gị." Mgbe ahụ, Pọl, inyịme aka ya, malitere inye ya agbachitere.
26:2 "M na-ewere onwe m gọziri agọzi, O eze Agrippa, na mụ onwe m na-enye m na-azara ọnụ taa tupu ị, banyere ihe nile nke ebo m ebubo ndị Juu,
26:3 karịsịa ebe ọ bụ na ị maara na ihe niile na-ahụ gbasara ndị Juu, ma na omenala na ajụjụ. N'ihi nke a, Ana m arịọ gị na-ege ntị m ndidi.
26:4 Na-, ndị Juu niile maara banyere ndụ m site na nwata, nke nwere mmalite ya n'etiti ndị m na Jerusalem.
26:5 Ha maara m nke ọma site ná mmalite, (ma ọ bụrụ na ha ga-adị njikere na-enye àmà) maka m bi dị ka ndị kasị kpebisiri ịrọ òtù nke okpukpe anyị: dị ka a Pharisee.
26:6 Ma ugbu a,, na ọ bụ na olileanya nke nkwa ahu ekwere na Chineke nna nna anyị hà na m na-eguzo n'okpuru ikpe.
26:7 Ọ bụ na Nkwa na anyị ebo iri na abụọ, efe abalị na ehihie, -atụ anya ịhụ. Ihe a na olileanya, O eze, Ebo m ebubo ndị Juu.
26:8 Gịnị mere ọ ga-ekpe ikpe otú unbelievable na ị niile na Chineke nwere ike ịkpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ?
26:9 Na-, Mụ onwe m na n'oge gara aga na-ewere na m kwesịrị ime ọtụtụ ụzọ nke bụ ihe megidere aha Jizọs Onye Nazaret.
26:10 Nke a bụ otú m mere na Jerusalem. Ya mere, M nchọ ọtụtụ nsọ n'ụlọ mkpọrọ, ọ natara ikike n'aka ndị ndú nke ndị nchụàjà. Na mgbe ha na-na-egbu, M wee kpọtara ikpe.
26:11 Na na ọ bụla synagogue, ugboro ugboro mgbe ha ahụhụ, M manyere ha ka ha na-ekwulu. Na a na-niile ọzọ maddened megide ha, M na-akpagbu ha, ọbụna mba ọzọ obodo.
26:12 Mgbe nke ahụ gasịrị, dị ka m na-aga Damaskọs, na ikike na ikike site n'aka nnukwu onye nchụàjà,
26:13 ehihie, O eze, M na ndị bụ ndị na-na m, hụrụ n'ụzọ a ìhè si n'eluigwe na-enwu gburugburu m na a ịma mma karịrị nke anyanwụ.
26:14 Na mgbe anyị nwere ihe niile adawo ala, A nuru m olu na-ekwu okwu ka m na asụsụ Hibru: 'Sọl, Saul, gịnị mere i ji na-akpagbu m? Ọ bụ ike ka i agaghịkwa megide ndụdụ. '
26:15 M wee sị, 'Onye ka ị bụ, Jehova?'Jehova we, 'Abụ m Jizọs, onye ị na-akpagbu.
26:16 Ma bilie guzoro n'ụkwụ gị. N'ihi na m pụtara ìhè n'ihu gị n'ihi nke a: ka m wee mee ka unu dị ka a na-eje ozi na onye àmà banyere ihe ndị ị na-hụrụ, na banyere ihe ndị na m ga-egosi na ị na:
26:17 anapụta gị n'aka ndị na mba ndị m ugbu a na-eziga gị,
26:18 iji meghee anya ha, nke mere na ha nwere ike ghọrọ si n'ọchịchịrị ìhè, na site na ike Setan na Chineke, nke mere na ha nwere ike na-enweta mgbaghara mmehie, na ebe n'etiti ndi nsọ, site na okwukwe na bụ na m. '
26:19 Site mgbe ahụ, O eze Agrippa, M bụ na-ekweghị ekwe ka eluigwe ọhụụ.
26:20 Ma, m na-ekwusa, mbụ ndị na-na Damascus na na Jerusalem, na mgbe ahụ ka dum mpaghara nke Judia, na ndị mba ọzọ, nke mere na ha ga-echegharị na tọghata Chineke, eme na ọrụ ndị kwesịrị nchegharị.
26:21 Ọ bụ n'ihi na nke a mere na ndị Juu, ọ na-achọ ijide m mgbe m nọ n'ụlọ nsọ na, nwara igbu m.
26:22 Ma ebe e enyere ha aka na-enyemaka nke Chineke, ọbụna ruo taa, M eguzo na-ekwusa ozi ka ndị nta na ndị ukwu, ekwu ihe ọ bụla karịrị ihe ndị amụma na Moses kwuru ga-eme n'ọdịnihu:
26:23 ya na Kraịst ga-ata ahụhụ, na na ọ ga-abụ nke mbụ si mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, na na ọ ga-eme ka ìhè na ndị mmadụ na ndị mba ọzọ. "
26:24 Mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a na-eweta ya na-azara ọnụ, Festọs wee sị na a oké olu: "Paul, ị na-ara! Ukwuu na-amụ emewo gị ara. "
26:25 Ma Pọl siri: "Abụ m bụghị ara, kasị magburu onwe Festus, kama m na-ekwu okwu nke eziokwu na sobriety.
26:26 N'ihi na eze maara banyere ihe ndị a. Iji ya, M na-ekwu mgbe niile,. N'ihi na m na-eche na ọ dịghị onye nke ihe ndị a na-amaghị ama na ya. Dịghịkwa na ihe ndị a mere na a akuku.
26:27 Ì kwere na ndi-amuma, O eze Agrippa? M maara na i kwere. "
26:28 Agripa we si Pọl, "Ruo n'ókè ụfọdụ, ị eme ka m kweta ịghọ onye Kraịst. "
26:29 Ma Pọl siri, "M na-atụ Chineke na, ma a obere n'ókè na a ukwuu, bụghị naanị gị, kamakwa ndị niile na-anụ olu m taa, a ga-adị nnọọ ka mu onwem bu kwa, ma e wezụga n'ihi na ndị a ígwè. "
26:30 Na eze bilie, na gọvanọ, na Banaisi, na ndị na-ọdụ na ha.
26:31 Ma mgbe ha napụrụ, ha nọ na-ekwu n'etiti onwe ha, si, "Nwoke a mere ihe ọ bụla kwesịrị ọnwụ, ma ọ bụ tụọ ya mkpọrọ. "
26:32 Agripa we Festọs, "Nwoke a nwere ike a tọhapụrụ, ma ọ bụrụ na ọ na-rịọrọ Caesar. "
Ọrụ nke Ndịozi 27
27:1 Mgbe e kpebiri iziga ya ji ụgbọ mmiri na Italy, na na Paul, na ndị ọzọ n'ụlọ mkpọrọ, ga-anapụta a agha aha ya bụ Julius, nke ìgwè ndị agha nke Augusta.
27:2 Mgbe ọ nọsịrị n'ụgbọ a ụgbọ mmiri si Adramyttium, anyị so wee malite ịnyagharịa tinyere ọdụ ụgbọ mmiri nke Asia, na Arịstakọs, na Masedonia si Tesalonaịka, isonyere anyị.
27:3 Na ndị na-esonụ ụbọchị, anyị rutere Sidon. na Julius, n'imeso Paul humanely, kwere ya gakwuru ndị enyi ya na anya mgbe ya onwe ya.
27:4 Na mgbe anyị ji ụgbọ mmiri si n'ebe, anyị navigated n'okpuru Cyprus, n'ihi na ifufe nọ na-efegide.
27:5 Na-agabiga ezie na oké osimiri nke Silishia na Pamfilia, anyị rutere Lystra, nke di na Lycia.
27:6 N'ebe ahụ, onyeisi ndị agha hụrụ otu ụgbọ mmiri si Alegzandria gara ka Italy, na o bufere anyị ya.
27:7 Ma mgbe anyị sikwa nwayọọ nwayọọ ruo ọtụtụ ụbọchị ma sonso rutere abụghị Cnidus, n'ihi na ifufe nọ na-igbochi anyị, anyị jiri ụgbọ mmiri gaa Crete, nso salmon.
27:8 Na sonso ike ụgbọ mmiri gafere ya, anyị rutere n'otu ebe na, nke a na-akpọ Good Chebe, na-esote nke bụ obodo Lasea.
27:9 Mgbe ahụ, mgbe oge agafeela, na ebe ọ bụ na ụgbọ mmiri ga-agakwaghị enwe akọ n'ihi na Fast Day ugbu a gafere, Paul kasiri ha,
27:10 na ọ sịrị ha: "Men, Ana m aghọta na njem bụ ugbu a na ihe ize ndụ nke mmerụ na ọtụtụ mmebi, ọ bụghị naanị ka ibu na ụgbọ mmiri, ma anyị onwe anyị ndụ. "
27:11 Ma onyeisi ndị agha na-etinye ihe ntụkwasị obi na-isi na akwọ ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri, karịa na ihe na-kwuru site Paul.
27:12 Ma ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị na mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri nke na-oyi, ọtụtụ chere iji ụgbọ mmiri si n'ebe, nke mere na n'ụzọ ụfọdụ ha nwere ike na-abata na Finishia, iji oyi, na a na ọdụ ụgbọ mmiri nke Crete, nke anya si n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ na n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ.
27:13 Ma ebe ọ bụ n'ebe ndịda ifufe na-efe nwayọọ, na ha chere na ha nwere ike iru ihe mgbaru ọsọ ha. Ma mgbe ha si Asson, ha dọlitekwara arịlịka na Crete.
27:14 Ma, ọ bụghị ogologo emesia, a-eme ihe ike ifufe bịara megide ha, nke a na-akpọ Northeast Wind.
27:15 Na mgbe ụgbọ mmiri ahụ e jidere ya ma ọ bụghị ike na-agbalịsi ike megide ifufe, enye n'elu ụgbọ mmiri ndị ifufe, anyị nọ na-chụpụrụ tinyere.
27:16 Mgbe ahụ, a na-amanye ndị a n'otu agwaetiti, nke a na-akpọ ndị na ọdụ, anyị sonso ike ịnọgide na-ụgbọ mmiri echebe.
27:17 Mgbe a nọ, ewe welie, ha na-eji ya iji nyere aka ichebe ndị ship. N'ihi na ha na-atụ egwu na ha nwere ike na-agba ọsọ ụgbọ mmiri. Na ebe budara ihe ákwà ifufe, ha na-a chụpụrụ tinyere n'ụzọ dị otú a.
27:18 Mgbe ahụ, ebe anyị nọ na-ebugharị ike site oké ifufe, n'echi, Ha tụbara arọ ihe mmiri.
27:19 Na n'ụbọchị nke atọ,, na aka ha, Ha tụbara ngwá ọrụ nke ụgbọ mmiri mmiri.
27:20 Mgbe ahụ, mgbe anyanwụ ma ọ bụ kpakpando na-apụtaghị ruo ọtụtụ ụbọchị, na-enweghị ọgwụgwụ ka oké ifufe ahụ na-eru nso, olileanya anyị nchekwa ugbu a napụrụ.
27:21 Ma mgbe ha buru ọnụ ruo ogologo oge, Paul, guzo n'etiti ha, kwuru: "N'ezie, ikom, ị gaara ege ntị m ma ghara si Crete, ka i mee ka a mmerụ ahụ na ọnwụ.
27:22 Ma ugbu a,, ka m ka ị na-obi ike na mkpụrụ obi. N'ihi na e nwere ga-enwe ọnwụ nke ndụ n'etiti unu, ma naanị nke ụgbọ mmiri.
27:23 N'ihi na ihe Angel nke Chineke, onye na-kenyere m na onye m na-eje ozi, guzo n'akụkụ m n'abalị a,
27:24 si: 'Atụla ụjọ, Paul! Ọ dị mkpa ka ị na-eguzo n'ihu Siza. Ma, le, Chineke nyere gị ndị niile na-ụgbọ gị. '
27:25 N'ihi nke a, ikom, inwe obi ike na mkpụrụ obi. N'ihi na m na-atụkwasị obi na Chineke na nke a ga-eme na otú ahụ na ọ na a gwara m.
27:26 Ma, ọ dị mkpa ka anyị na-abata na a n'otu agwaetiti. "
27:27 Mgbe ahụ, mgbe iri na anọ n'abalị rutere, ka anyị nọ na-agabiga na oké osimiri nke Adria, banyere n'etiti abalị, ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ kweere na ha hụrụ akụkụ ụfọdụ nke ala.
27:28 Na n'elu idobe a arọ, ha hụrụ a omimi nke iri abụọ paces. Na ụfọdụ anya site n'ebe, ha hụrụ a omimi nke iri na ise paces.
27:29 Mgbe ahụ, na-atụ egwu na anyị nwere ike ime n'elu ike ike ebe, ha arịlịka anọ si n'azụ ụgbọ, ha na-enwe olileanya n'ihi na ìhè na-abata anya.
27:30 Ma n'ezie, ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-achọ ụzọ isi na-agba ọsọ site na ụgbọ mmiri, n'ihi na ha zie a echebe n'ime oké osimiri, na-asị na ha na-agbali igba arịlịka si ụta nke ụgbọ mmiri.
27:31 N'ihi ya, Pọl gwara onyeisi ndị agha na ndị agha, "Ọ bụrụ na ndị ikom a anọgideghị n'ụgbọ mmiri, ị ga-enwe ike a ga-azọpụta. "
27:32 Mere ndi-agha bee ụdọ na-echebe, na ha kwere na ọ na-ada.
27:33 Na mgbe ọ malitere ìhè, Paul rịọrọ ka ha niile rie oriri, si: "Nke a bụ nke iri na anọ n'ụbọchị i a na-eche na aka iso ngwa ngwa, na-ewere ihe ọ bụla.
27:34 N'ihi nke a, Ana m arịọ gị ịnabata nri n'ihi na ike gị. N'ihi na ọ bụghị a ntutu isi site na isi nke ọ bụla n'ime unu ga-ala n'iyi. "
27:35 Na mgbe o kwusịrị ihe ndị a, na-ewere nri, o nyere Chineke ekele n'anya ha niile. Na mgbe ọ agbaji ya, o wee malite iri.
27:36 Mgbe ahụ, ha niile bịara ọzọ udo na mkpụrụ obi. Na ha na-were nri.
27:37 N'ezie, anyị dị narị abụọ na iri asaa na isii mkpụrụ obi na ụgbọ mmiri.
27:38 Na ọ na e iriju afọ na nri, ha mee ụgbọ mmiri, nēfe ọka wit n'ime oké osimiri.
27:39 Na mgbe ụbọchị ruteworo, ha amataghị odida obodo. Ma n'ezie, ha hụrụ a ụfọdụ warara uzo mmiri na-enwe a n'ikpere mmiri, n'ime nke ha chere na ọ ga-ekwe omume ịmanye ship.
27:40 Ma mgbe ha ewerewo arịlịka, ha mere onwe-ha ka oké osimiri, n'otu oge atọpụ restraints nke amara. Ya mere, ịkpọlite ​​ndị mainsail na gusting ifufe, ha enwe na n'ebe n'ụsọ.
27:41 Ma mgbe anyị mere n'elu ebe-emeghe abụọ n'oké osimiri, ha gbara ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri. ma n'ezie,, ụta, a megharịa, nọgidere ofu, ma n'ezie n'azụ ụgbọ ahụ e tiwara na ihe ike nke oké osimiri.
27:42 Mere ndi-agha ndi nọ nkwekọrịta na ha ga-egbu ndị mkpọrọ, ghara onye ọ bụla, mgbe agbapụ site igwu, gbaa ọsọ.
27:43 Ma onyeisi ndị agha, chọrọ ịzọpụta Paul, machibidoro ya si na-eme. Na o nyere iwu ndị na-enwe ike igwu mmiri na-awụlikwa elu na mbụ, na-agbanahụ, na-esi na ala.
27:44 Ma ndị nke ọzọ, ụfọdụ ha na-arụ na mbadamba, na ndị ọzọ na ihe ndị ahụ bụ na ụgbọ mmiri. N'ihi ya, ọ dabara na mkpụrụ obi ọ bụla gbaga n'ala.
Ọrụ nke Ndịozi 28
28:1 Na mgbe anyị na ndị gbapụrụ agbapụ, anyị na-ahụ ghọtara na-akpọ agwaetiti ahụ Mọlta. Ma n'ezie, natives nyere anyị abụghị obere ego nke obi mmadu ọgwụgwọ.
28:2 N'ihi na ha na-enweta ume ọhụrụ anyị niile site kindling a ọkụ, n'ihi na mmiri ozuzo na-eru nso, na n'ihi na oyi na-atụ.
28:3 Ma mgbe Paul gbakọtara a ùkwù Alaka, ma tụkwasị ha n'elu ọku, ala ajụala, nke e adọta okpomọkụ, kpọgidere ya n'aka-ya.
28:4 Na n'ezie, mgbe natives hụrụ anụ ọhịa ahụ nghọta si n'aka-ya, ha na-asị ibe: "N'ezie, nwoke a ga-abụ a na-egbu ọchụ, maka ezie na o wepuga onwe-ya site na oké osimiri, ọbọ agaghị ekwe ya ndụ. "
28:5 Ma n'ikwe kwụsịrị kere eke n'ime ọkụ, ọ n'ezie kweghi onye ọ na-arịa ọrịa mmetụta.
28:6 Ma ha ji ndị chere na ọ ga-adịghị anya zaa elu, na mgbe ahụ ga na mberede-ada n'ala ma na-anwụ. Ma, ebe ọ na-echere a ogologo oge, na ịhụ mba nsogbu na ya, ha gbanwere obi ha ma na-ekwu na ọ bụ chi.
28:7 Ugbu a n'etiti ndị a ebe di ala ekesịpde site na onye na-achị nke agwaetiti, aha ya bụ Pọbliọs. o, na-ewere anyị dị na, gosiri anyị ụdị ọbịa ruo ụbọchị atọ.
28:8 Mgbe ahụ, ọ dabara na nna Pọbliọs dina ọrịa na-a fever na na ọnyụnyụ ọbara. Paul banyere ya, na mgbe o kpere ekpere na bikwasịrị ya aka na ya, ọ zọpụtara ya.
28:9 Mgbe a na e mere, ndị niile nwere ọrịa n'àgwàetiti bịakwutere na gwọrọ.
28:10 Mgbe ahụ, ha nwekwara ihe ndị anyị na ọtụtụ ukpono. Ma mgbe anyị na ndị dị njikere iso ụgbọ mmiri gawa, ha nyere anyị ihe ọ bụla dị anyị mkpa.
28:11 Ya mere, mgbe ọnwa atọ gasịrị, anyị ji ụgbọ mmiri na a ụgbọ mmiri si Alegzandria, onye aha-ya bu Castors,'Na nke n'oge oyi na agwaetiti.
28:12 Na mgbe anyị rutere na Syracuse, anyị nọ na-egbu oge n'ebe ahu ubọchi atọ.
28:13 site n'ebe, gara nso n'ikpere mmiri, anyị rutere Rhegium. Na mgbe otu ụbọchị, na ifufe Ndida fụrụ, anyị bịarutere n'ụbọchị nke abụọ mgbe Puteoli.
28:14 Ebe ahụ, mgbe ịchọta ụmụnna, gwara anyị ka anyị na ha nọrọ ruo ụbọchị asaa. Na mgbe ahụ anyị wee Rome.
28:15 na e, mgbe ụmụnne nụrụ nke anyị, ha we je izute anyị ruo Forum Apịọs na Atọ nke Ndị Ije. Mgbe Pọl hụrụ ha, nēkele Chineke, O were obi ike.
28:16 Na mgbe anyị rutere Rome, Paul e nyere ikike na-anọ naanị ya, ya, na onye agha na-eche ya.
28:17 Na mgbe n'ụbọchị nke atọ, ọ kpọkọtara ndị ndú ndị Juu. Ma mgbe ha kpọkọrọ, O wee sị ha: "Noble ụmụnna, M mere ihe megide ndị mmadụ, ma ọ bụ megide omenala nke ndi bu nna, ma a napụtakwara m dị ka onye mkpọrọ si Jerusalem n'aka ndị Rom.
28:18 Ma mgbe ha ẹkenịmde a-anụ banyere m, ha ga-tọhapụrụ m, n'ihi na ọ dịghị ikpe n'ihi ọnwụ megide m.
28:19 Ma, ya na ndị Juu na-ekwu okwu megide m, M na-constrained ka Siza kpegharịa ikpe, ezie na ọ bụghị na m nwere ụdị ọ bụla nke nmegide imegide m mba.
28:20 Ya mere, n'ihi nke a, M rịọrọ hụ gị na-agwa gị okwu. N'ihi na ọ bụ n'ihi olileanya + Izrel ka m na-encircled na agbụ ígwè a. "
28:21 Ma ha sịrị ya: "Anyị natara akwụkwọ ozi banyere gị site na Judia, ma ọ bụ ihe ọ bụla nke ndị ọzọ bịara ọhụrụ n'etiti ụmụnna kọrọ akụkọ ma ọ kwuo ihe ọ bụla ihe ọjọ megide unu.
28:22 Ma, anyị na-arịọ na-anụ gị echiche site ị, maka banyere ịrọ òtù a, anyị maara na ọ na a na-ekwu megide n'ebe niile. "
28:23 Ma mgbe ha họpụtara a ụbọchị maka ya, dị nnọọ ọtụtụ mmadụ gakwuuru ya na ya ọbịa ebe. O discoursed, àmà ka ala-eze Chineke, na ka ha kwenye n'ihe banyere Jesus, eji iwu nke Moses na ndi-amuma, site n'ụtụtụ ruo ná mgbede.
28:24 Na ụfọdụ chere na ihe ndị ọ na-ekwu, ndị ọzọ ekweghị.
28:25 Ma mgbe ha na-enweghị ike ikwere n'etiti onwe ha, ha we la,, ka Pọl nọ na-ekwu okwu onye nke a okwu: "Lee nnọọ ka Mmụọ Nsọ na-ekwu okwu ka nna nna anyị hà n'ọnụ Aịzaya onye amụma,
28:26 si: 'Gakwuru ndị a, sị ha: Ịnụ, ị ga na-anụ na-adịghị aghọta, na ịhụ, ị ga-ahụ ghara ịhụta.
28:27 N'ihi na obi nke ndị a adịkwaghị dull, na ha na-ege ntị na-ala azụ ntị, na ha mechiri anya ha ka ha tightly, ghara ikekwe ha nwere ike ịhụ na anya, ma na-anụ na ntị, na ịghọta na obi, na-converted, na m ga-gwọọ ha. '
28:28 Ya mere, ka amara gị, na nzọpụta a nke Chineke na e zigara ndi mba ọzọ, na ha ga-ege ntị na ya. "
28:29 Na mgbe o kwusịrị ihe ndị a, ndị Juu we si ya, ezie na ha ka nwere ọtụtụ ajụjụ n'etiti onwe ha.
28:30 Mgbe ahụ, ọ nọgidere ruo abụọ dum afọ nke aka ya, ịgbaziri agbaziri lodgings. O we nara ndị niile na-bakwuuru ya,
28:31 ekwusa alaeze Chineke, na-ezikwa ihe nke si Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na ndị niile na ikwesị ntụkwasị obi, -enweghị ukpan.